တဈခါပဲတျောပါပွီ – My Blog
စိမျးမွကွညျလငျနသေော ခြောငျးရပွေငျကို နှငျးအိ ငုံ့ကွညျ့လိုကျသညျ..။ ထိုအခိုကျ ကွှကေလြာသော စကားပှငျ့ကွောငျ့ ရမေကျြနှာပွငျလှုပျခါသှားပွီး ကွညျလငျသောရေ၌ ထငျဟပျနသေော နှငျးအိရဲ့ ရုပျပုံလှာမှာ တှနျ့လိမျကောကျကှေး၍ လှုပျခါသှားရသညျ..။ သူမ၏ ရုပျလှာမှာ ခုလို တကယျပဲ ရုပျပကျြဆငျးပကျြ ဖွဈနပွေီလား…နှငျးအိ တှေးလိုကျမိသညျ..။ ကွှကေလြာသော တရုတျစကားပှငျ့ ဖွူဖွူလေးက ခြောငျးရပွေငျတှငျ အခိုကျအတနျ့လေးသာ ရပျတနျ့သှားပွီးနောကျ ရစေီးနှငျ့အတူ မြောပါသှားသညျကို နှငျးအိ လိုကျပွီး ကွညျ့နမေိသညျ..။
တရုတျစကားပနျးပှငျ့ဖွူဖွူလေးက ရစေီးအတိုငျး လှတျလှတျကြှတျကြှတျကွီး မြောပါသှားရသညျ မဟုတျ..။ ရစေပျတှငျရှိသော သဈမွဈဆုံမြား ၊ ကြောကျတုံးမြားကို ကှပေ့တျကာ မြောပါသှားရသညျ..။ ပနျးပှငျ့လေးက အရာဝတ်ထုတို့ကို လှယျလှယျကူကူတော့ ကှပေ့တျသှားနိုငျသညျ မဟုတျပါ..။ ဆုံတှသေ့ော အရာတို့ကို ရစေီးအရှိနျနှငျ့အတူ တိုးတိုကျထိခိုကျမိပွီးမှသာ ရစေီးနှငျ့ ပါသှားရခွငျး ဖွဈသညျ..။ နှငျးအိဘဝကရော တရုတျစကားပနျးပှငျ့ဖွူဖွူလေးလို ကွှကေသြှားခဲ့ပွီး အခု ရစေုနျမြောရတော့မှာလား…။ မြောခငျြတိုငျးမြော ဆိုပွီး စိတျလှတျကိုယျလှတျ မြောခလြိုကျရငျလညျး လမျးခုလတျမှာ ကွုံတှရေ့မညျ့ အပိတျအပငျ အတားအဆီးမြားနှငျ့ ဘယျလို ရငျဆိုငျရလိမျ့ဦးမလဲ မသိ..။
နှငျးအိရငျမှာ တငျးကွပျလှသညျ..ဒီလိုအတှေး ဒီလိုခံစားခကျြတှနှေငျ့ နှငျးအိရငျထဲ မှနျးကွပျနခေဲ့ရတာ ကွာခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ..။ အမှနျတော့ အပွဈရှိသူက နှငျးအိရယျပါ..။ နှငျးအိက ဆတျဆော့ မိတာကိုး..။ သူ့ကိုရော အပွဈမရှိဘူးလို့ ပွောလို့ရမလား..။ တကယျဆို သူက ကိုယျ့ထကျ အသကျ အမြားကွီး ကွီးတဲ့သူပဲ..။ စဉျးစားခငျြ့ခြိနျနိုငျတာပဲ..။ နှငျးအိက ဆတျဆော့အုံးတော့ သူက ဆငျခွငျနိုငျတာပဲ..။ အို…ဒါမြိုးဆိုတာကလဲ အခကျသားကလား..။ စဉျးစားဉာဏျတှေ ကှယျပြောကျသှားတတျတာမြိုး မဟုတျလား..။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ နှငျးအိ သူ့ကို အပွဈရှိတယျလို့တော့ မရိုးစှပျခငျြတာ အမှနျပါ..။
တျောသေးသညျ..တဈနမှေ့ စိတျမအေးခဲ့ရ..။ တှေး၍ ပူနခေဲ့ရသော ကိစ်စက အခု ၃ လကြျောလာတဲ့အထိ ဘာမှ ထူးခွားမှု ရှိမလာတော့ နှငျးအိ ပူပနျရတာ တဈမြိုး သကျသာသှားသညျ..။ ဒါပမေယျ့ အရိပျမညျးကွီးက နှငျးအိနောကျ ကပျပွီးလိုကျပါနသေေးသညျ..။ ဒီအရိပျမညျးကွီးကတော့ ဘယျတော့မှ ကငျးကှာသှားမလဲ မသိတော့ပါ..။ နှငျးအိ အမွဲတှေးနမေိတာက ငါဟာ ဟိုတုံးကလို သနျ့သနျ့စငျစငျ မဟုတျတော့ဘူး..ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြကွီးက နှငျးအိရငျမှာ ဘယျလိုမှ ပြောကျ၍ မသှား…။ “ဟငျး………..“ နှငျးအိ သကျပွငျးကို လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲကွီး ခလြိုကျသညျ..။ပွီးတော့ ခြောငျးရပွေငျထကျသို့ ငုံ့ကွညျ့လိုကျမိပွနျသညျ..။
ရပွေငျတှငျ ထငျဟပျနသေော သူမ၏ ပုံရိပျက ပကတိ ကွညျလငျသနျ့စငျလို့ နသေညျ..။ ကဈြဆံမွီးလေးနှဈခြောငျး ဘယျညာခြ၍ မကျြနှာဝိုငျးဝိုငျး နှာတံပျေါပျေါ မကျြဆံကွီးကွီး လေးနှငျ့ သူမ၏ ရုပျလှာက ဘာမှ ပွောငျးလဲ မသှား ။ ပါးလေးနှဈဖကျတောငျ မသိမသာလေး ပို၍ ဖောငျးလာပွီး အရငျကထကျပငျ ပိုပွီး လှလာသယောငျ ထငျမှတျရသညျ..။ ဒါပမေယျ့ နှငျးအိရငျထဲမှာတော့ သူမကိုယျ သူမ ညဈနှမျးနပွေီ ဆိုသညျ့ အစှဲအလနျးကွီးက ရငျထဲမှာ အမွဲ မှနျးကွပျနရေသညျ မဟုတျပါလား..။ အဲဒီနေ့ အဲဒီအဖွဈပကျြကိုလညျး နှငျးအိ တဈသကျလုံး မလေို့ရလိမျ့မညျ မဟုတျတော့ပါ..။
မှတျမှတျရရ နှငျးအိ ၁၈ နှဈ တငျးတငျးပွညျ့တဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဝါခေါငျလဆနျး (၁၀) ရကျနကေ့ပေါ့..။ မှေးနရေ့ောကျတိုငျး နှငျးအိ အမွဲ လုပျနကြေ အလုပျတဈခု ရှိသညျ..။ ညနစေောငျးတှငျ ရှာဦးစတေီသို့ သှား၍ ပနျးနှငျ့ ဆီမီး ကပျလှူသညျ့ အလအေ့ထလေးပငျ ဖွဈသညျ..။ ရှာဦးစတေီက ရှာနှငျ့ တဆကျတစပျတညျး ရှိသညျမဟုတျပါ..။ ရှာတနျးရဲ့ ထိပျတှငျ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးဝနျးကွီးရှိသညျ..။ ကြောငျးဝနျး အလှနျတှငျ ရကေနျကွီး သုံးကနျရှိသညျ..။ ထိုရကေနျကွီးမြားကို လှနျ၍ ဆယျမိနဈ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျ လမျးလြှောကျသှားပါမှ ရှာဦးစတေီသို့ ရောကျသညျ..။ ရှာဦးစတေီ၏ ပရဝုဏျဘေးတှငျ ရှာဦးနတျစငျမြား ရှိသညျ..။
အခါကွီးရကျကွီးနမြေ့ားတှငျ ရှာဦးစတေီတှငျ လူစညျကားပွီး နတေတျပမေယျ့ ကနျြရကျတှမှောတော့ လူသူ ကငျးရှငျး၍ နတေတျသညျ..။ နှငျးအိ ရှာဦးစတေီကို ရောကျ၍ ပနျး ၊ ဆီမီးမြား လှူဒါနျးကာ ဆုတောငျးသညျ..။ ပွီးတော့ ညနဆေညျးဆာခြိနျတှငျ ရှာဦးစတေီမှ ကွညျ့လငျြ လယျကှငျးမြား ၊ ရှာမှ အိမျတနျးမြား ၊ လယျကှငျးတှေ အလှနျ ခွံမြားနှငျ့ ရှုခငျးမှာ ကွညျနူးဖှယျကောငျးလှသဖွငျ့ နှငျးအိ ခကျြခငျြး မပွနျသေးပဲ ရှာဦးစတေီ၏ တံတိုငျးမုချဝ တှငျရှိသော အုတျခုံကွီးပျေါသို့ တကျကာ ခဏထိုငျနလေိုကျသညျ..။ နှငျးအိ ပတျဝနျးကငျြ ရှုခငျးတှကေို ကွညျ့၍ မဆုံးမီမှာပငျ မိုးစကျမိုးပေါကျတှကေ ကရြောကျလာတော့သညျ..။ နှငျးအိ အုတျခုံပျေါမှ ခုနျဆငျးပွီး လှမျးအထှကျလိုကျ မိုးက ပိုသညျးလာသညျ..။
နှငျးအိတှငျ ခမောကျလညျး မပါ.၊ ထီးလညျး မပါခြေ..။ ရှာဘကျသို့ နှငျးအိ ခပျသုတျသုတျလေး လြှောကျပွနျလာခဲ့သညျ..။ မိုးက မစဲဘဲ သညျးမွဲ သညျးလို့နသေညျ..။ နှငျးအိတဈကိုယျလုံး စိုရှဲ၍ နပွေီ..။ ရကေနျကွီးမြားနား အရောကျ နှငျးအိ ခမျြး၍ တုနျလာသညျ..။ တဈခကျြတဈခကျြ တိုကျလိုကျသော လကေ ခမျြးအေးလှသညျ..။ ဘုနျးကွီးကြောငျးဝနျးကွီးကို လှနျ၍လာသညျ..။ နောကျထပျ ဆယျမိနဈခနျ့ လြှောကျလငျြ အိမျသို့ ရောကျတော့မညျ..။ အားတငျး၍ ဆကျလြှောကျပါက လြှောကျနိုငျသညျ..။ ဒါပမေယျ့ နှငျးအိ မလြှောကျခငျြတော့..။
ဘုနျးကွီးကြောငျးဝနျးအလှနျနားတှငျ နှငျးအိတို့ အဈမ မအေးမိတို့ ခွံရှိသညျ..။ နှငျးအိအဈမဖွဈသူ၏ ခွံထဲသို့ ပွေးဝငျခဲ့သညျ..။ “ဟာ…နှငျးအိ..ဘယျလိုဖွဈလာတာလဲ…မိုးရှာထဲကွီး…သှား သှား..အိမျပျေါတကျ..နငျ့အဈမ အဝတျတှနေဲ့ လဲထားလိုကျ…“ “ဟို….ဟို ..ရှာဦးစတေီက…ပွနျလာတာ….“ နှငျးအိ အိမျရှသေို့ ရောကျလငျြ အိမျရှကေု့နျးထဲ၌ အကငြ်္ီမပါ ကြောပွောငျကွီးဖွငျ့ နှားစာစဉျးနသေော သူမ၏ ခဲအို ကိုလှဦးက လှမျး၍ ပွောသညျ..။ လှဦး ညနတေိုငျး သောကျတတျသညျ..။ လှဦးကို ပွနျပွောသော နှငျးအိအသံက ခမျြးလှနျးသဖွငျ့ လကေ သိပျပွီး မဆကျခငျြ..။ နှငျးအိ ရစေိုကွီးနဲ့ပငျ အိမျပျေါသို့ တကျလာခဲ့သညျ..။
“နငျ့အဈမ နဲ့ သံခြောငျးတော့ နငျတို့အိမျကို သှားတယျ..၊ မိုးတိတျမှ ပွနျလာမယျနဲ့ တူတယျ..“ အိမျရှမှေ့ လှမျးပွောလိုကျသော လှဦးအား နှငျးအိဘာမှ ပွနျ၍ မပွောမိ..။ သံခြောငျးဆိုတာက ၄ နှဈသာရှိသော သူမ၏ တူလေးဖွဈသညျ..။ မီးဖိုခြောငျ နောကျဘကျ နံရံတှငျ ဝါးထရံကွား၌ ညှပျ၍ လှနျးထားသော အဈမဖွဈသူ၏ ထဘီတဈထညျကို ဆှဲယူ၍ ရစေိုအဝတျနှငျ့ လဲကာ ဝတျလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ သူမရဲ့ ရစေိုနတေဲ့ ထဘီကို ညှဈကာ နံရံရှိ ဝါးတနျးကွား၌ ညှပျ၍ ပွနျလှနျးလိုကျသညျ..။ ထို့နောကျ သူမ၏ ကိုယျအပျေါပိုငျးမှ အကငြ်္ီမြားကို ခြှတျ၍ ထဘီကို ရငျလြားပွီး အခနျးထဲသို့ ဝငျလာခဲ့သညျ..။ အခနျးထဲရှိ ကွိုးတနျးပျေါမှ အဈမဖွဈသူ၏ အကငြ်္ီမြားထဲမှ တဈထညျကို ဆှဲယူလိုကျသညျ..။
ဘျောလီတော့ မဝတျတော့..။ အကငြ်္ီ ခပျထူထူ လေးပဲ ဝတျပွီး ပွနျမညျဟု တှေးကာ နှငျးအိ အခနျးပေါကျကို ကြောပေးပွီး ရငျလြားထားသော ထဘီကို ခါးသို့ လြှော၍ ဝတျလိုကျသညျ..။ နှငျးအိရဲ့ ခန်ဓကိုယျ အပျေါပိုငျး တဈခုလုံး ဘာအဝတျအစားမှ မရှိပဲ ဟာလာဟငျးလငျး ဖွဈသှားသညျ..။ နှငျးအိ လကျထဲမှ အကငြ်္ီကို ဝတျရနျ လကျနှဈဖကျ ပငျ့မွှောကျကာ ဘယျဖကျလကျဖွငျ့ အကငြ်္ီလကျပေါကျကို အစှပျ…… “အမ..လေး…..ဟငျ..အဈကို လှဦး….လှတျ…လှတျပါ…..“ သူမ၏ နောကျမှ နေ၍ တစုံတယောကျက သိုငျးဖကျလိုကျသဖွငျ့ နှငျးအိ ကွောကျအားလနျ့အား လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ လှဦးကို တှလေို့ကျရသညျ..။
ကွောကျလနျ့စှာဖွငျ့ နှငျးအိက ရုနျးလိုကျပမေဲ့ မွဲမွံလှတဲ့ လှဦးရဲ့ လကျနှဈဖကျက သူမကို အတငျးညှဈ၍ ဖကျထားသလို လှဦး လကျဖဝါးတဈဖကျကလညျး သူမ၏ နို့လေးတဈဖကျကို အုပျကိုငျကာ ဖှဖှလေး ဆုပျနယျနသေညျ..။ လှဦးထံမှ အရကျနံ့က နှငျးအိ ခေါငျးပငျ ကိုကျခငျြလာသညျ..။ နှငျးအိ အတငျးရုနျးသညျ..။ သူမခန်ဓကိုယျက လှုပျ၍ပငျ မရခြေ..။ “လှတျပါ….အဈကိုလှဦး…ရှငျ…ခှေးကငျြ့ခှေးကွံ …မကွံ နဲ့…အဈမ နဲ့ ပွနျတိုငျပွောမှာ….နျော…“ “နှငျးအိကလဲ ဟာ..ခုဟာက ဘယျသူမှ သိတာမှ မဟုတျတာ…နငျ့အဈမ ပွနျတိုငျလိုကျလို့ အေးမိ အျောကွီးဟဈကယျြလုပျမှ….နငျပဲ..အရှကျကှဲလိမျ့မယျ….“ “အို..အို….မသိဘူး….လှတျ…လှတျ….ဟငျ့…..အဟငျ့..အီး…ဟီး….“ နှငျးအိ ငိုခလြိုကျသညျ… ။
လှဦးကတော့ တပွားသားမှ မလြှော့ပါ..။ လကျတဈဖကျဖွငျ့ နှငျးအိကိ နောကျမှ ကွုံး၍ ဖကျထားပွီး ကနျြလကျတဈဖကျက နှငျးအိ၏ နို့နှဈလုံးကို ဘယျပွနျညာပွနျ ပငျ ကိုငျ၍ ဆုပျနယျနပေါသေးသညျ..။ နှငျးအိတဈကိုယျလုံး အပူလှိုငျးတို့က တဖွေးဖွေး ရဈပတျလို့ လာသညျ..။ နှငျးအိ သူ့ကို ဘာမှ မပွောနိုငျတော့…။ ငိုမွဲ ငိုလကျြသာ ရှိသညျ..။ “အီး..ဟီး ဟီး…ဟီး…ဟငျ့….အီး….ဟီး……“ ပွီးတော့ လှဦးက နှငျးအိရဲ့ မှေးညှငျးနုနုလေးတှေ ပေါကျနသေော ဂုတျပိုးသား နုနုဖှေးဖှေးလေးတှကေို နှုတျခမျးနှငျ့ ဖိစုပျ၍ ဒလစပျပငျ နမျးနသေညျ..။
ထိုသို့ နမျးရငျး သူ့လြှာဖြားဖွငျ့ ဂုတျပိုးသားလေးတှကေို ထိုးထိုးပွီး ယကျလိုကျသေးသညျ..။ နှငျးအိ ဒူးတှေ မခိုငျတော့ ၊ ညှတျ၍ ကခြငျြလာသညျ..။ နှငျးအိ ဘာလုပျရမှနျး မသိတော့.. ။ လှတျရာလှတျကွောငျး ဘယျလိုလုပျရမလဲ ဆိုတာကိုလဲ မစဉျးစားနိုငျတော့..။ တဈကိုယျလုံး ရဈသိုငျး၍လာသော ဖိနျးရှိနျးလို့ လာသော အပူလှိုငျး ခံစားခကျြတို့သာ အာရုံက ရောကျ၍ရောကျ၍ လာသညျ..။ တဟီးဟီး ငိုသံလေးက တဖွေးဖွေး ပြောကျ၍ သှားပွီး တဈခကျြတဈခကျြ ရှိုကျသံလေးမြားနှငျ့ အတူ မကျြရညျမြားကတော့ တစိမျ့စိမျ့ ထှကျနဆေဲ..ဖွဈသညျ..။ “ဟငျ…မလုပျနဲ့…..မလုပျနဲ့…..လို့….“ နှငျးအိ လှမျးဆှဲလိုကျပမေယျ့ နောကျကသြှားပွီ..။
ခါးတှငျ ဖွဈသလို ပတျထားသော ထဘီလေးက ကှငျးလုံးကြှတျကသြှားသညျ..။ ဒီမှာတငျ နှငျးအိ နို့လေးတှပေျေါမှ သူ့လကျကွီးက နှငျးအိရဲ့ တငျသားဖှေးဖှေးကားကားကွီးမြား အပျေါ ရောကျသှားပွီး ညှဈနယျပါတော့သညျ..။ “အိ…အိ…မလုပျပါနဲ့….ဟငျ့ ဟငျ့……“ သူ့လကျဖဝါးကွမျးကွမျးကွီးက နှငျးအိရဲ့ တငျသား ဖှေးနုနုကွီးတှကေိ အားရပါးရ ဆုပျနယျနလေိုကျတာ နှငျးအိကိုယျလေးပငျ ရှသေို့ ငိုကျငိုကျကြ သှားရသညျ..။ နှငျးအိကို မွဲမွံစှာ ထိနျခြုပျဖကျတှယျထားသော သူ့လကျကွီးတဈဖကျကတော့ နှငျးအိကိုယျလေးကို မလှတျ…။ တငျးတငျးကွီး ဖကျထားမွဲ….။ ခကျတာက နှငျးအိ ဖငျကိုငျ မခံနိုငျ ခွငျးပငျ ဖွဈသညျ…။
နောကျမှ တငျသားကွီးတှကေို အကိုငျခံရလငျြ အရှကေ့ ဟာလေးက တရှရှဖွဈလာကာ ဖောငျးထလာတတျသညျ..။ “အို အို….မလုပျနဲ့…တျောတော့….တျောပါ တော့ဆို….ဘာတှမှေနျးလဲ… မသိဘူး….တျော….တော့…အို့..အို့…“ နှငျးအိ တောငျစဉျရမေရ ဘာတှေ ပွောလို့ ပွောမိမှနျး မသိတော့…။ တဈကိုယျလုံး တဆတျဆတျ တုနျခါနသေော နှငျးအိ ရုနျးကွညျ့ပွနျသညျ..။ သူမ၏ အဝတျမဲ့ ခန်ဓကိုယျလေးက လှုပျ၍ပငျ မရအောငျ သူ့လကျကွီးက ခိုငျမွဲ သနျစှမျးလှသညျ..။ “နှငျးအိကလဲ ဟာ..အလကား အပငျပနျးခံပွီး ရုနျးနသေေးတယျ..ဘယျသူ သိတာမှတျလို့..“ “အဈမတို့ ..ပွနျ…လာရငျ ခကျမယျ…..“ “ဟဲ..ဟဲ…နငျ့အဈမနဲ့ နငျ့တူက ငါသှားချေါမှ ပွနျလာမှာဟ… ကဲ..လာပါ ဟာ..“ လှဦးက နှငျးအိကိုယျပျေါမှ ဖကျထားသော သူ့လကျကွီးကို ဖယျလိုကျပွီး အိပျယာထဲ ဆှဲ၍ ချေါသညျ..။
ခွတေဈလှမျးစာမြှ ဝေးသော အိပျယာဆီသို့ နှငျးအိ ကိုယျလုံးလေး ရောကျ၍အသှား လှဦးက လကျတဈဖကျမှ နှငျးအိကို ကိုငျထားရငျး ကနျြလကျတဈဖကျက သူ့ကိုယျပျေါမှ ပုဆိုးကို ခြှတျခလြိုကျသညျ..။ “ဟာ….“ နှငျးအိမွငျဖွဈအောငျ မွငျလိုကျရသေးသညျ..။ တဈမိုကျလောကျ ရှိသော သူ့ဟာကွီးက အကွောတှေ အပွိုငျးပွိုငျးထလကျြ တနျးမတျနသေညျ..။ ထိပျကွီးက အိမျရှမေ့နျကညျြးပငျကွီးတှငျ တှရေ့သော ပုတျသငျညိုအကောငျကွီး၏ ခေါငျးကွီးလောကျ ရှိသညျ..။ ပွီးတော့ ပုတျသငျညိုခေါငျးလို တဆတျဆတျ ငွိမျကလကျြ နှငျးအိကို ဖြားယောငျးချေါဆောငျနသေလို ဖွဈနသေညျ..။
နှငျးအိ သူ့ဟာကွီးကို ကွညျ့မိရငျး ခဏမြှ ငိုငျကသြှားသညျ..။ ထိုခဏမှာပငျ လှဦးက အိပျယာပျေါထိုငျခလြိုကျပွီး သူမကိုပါ ဆှဲထိုငျခလြိုကျသညျ..။ နှငျးအိတဈယောကျ အိပျယာပျေါ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျလကျြလေး ဖွဈအသှား နှငျးအိကို ဖကျ၍ လှဲခလြိုကျတော့မညျ အလုပျ နှငျးအိတဈယောကျ အခှငျ့အရေးကို လကျလှတျမခံပဲ လကျတဈကမျးအကှာမှာ ရှိသော ထဘီကို လှမျးဆှဲကာ ဆတျခနဲ ထ၍ ပွေးသညျ..။ “ဖုနျး….အ..မလေး.သေ ပါပွီ….“ ဘယျရမလဲ..လှဦးကလဲ နပျပွီးသား..၊ ရှရေ့ောကျမှတော့ လကျလှတျမခံနိုငျပေ..။ နှငျးအိထ၍ အပွေး သူ့ခွထေောကျတဈဖကျဖွငျ့ ထိုး၍ ခွဂေလနျ့ ထိုးခံလိုကျတော့ နှငျးအိ ဝုနျးခနဲ ပဈလဲကသြှားတော့သညျ..။
“အား….အီး…အ…..နာလိုကျတာ….“ နှငျးအိ ခါးလေးကို လကျဖွငျ့ နှိပျရငျး ငွီးတှားနရောမှ ထ၍ထိုငျရနျ ကွိုးစားလိုကျသညျ..။ “နှငျးအိကလဲဟာ…နငျက အသားနာခံခငျြတာကိုး…အလကား အခြိနျတှေ ကွာနတေယျ… အသားလဲ နာတယျ…ငွိမျငွိမျ သကျသကျ နလေိုကျရငျ ခုလောကျဆို နငျ အိမျပွနျလို့ရသှားပွီ…“ နှငျးအိ ထထိုငျရနျ ကွိုးစားလိုကျပမေယျ့ ခါးက အတျောနာနသေဖွငျ့ မထိုငျနိုငျတော့ပါ..။ မကျြနှာလေး ရှုံ့မဲ့ရငျးသာ လကျတဈဖကျက ခါးကို နှိပျနရေသညျ..။ နှငျးအိ ပုံစံလေးက တစောငျး မကတြကြ ပကျလကျကလေး ဖွဈနပွေီး ပေါငျဖွူဖွူလေးတဈဖကျက ကွှ၍ နသေညျ..။
ပေါငျကွားမှ အုပျဆိုငျးနသေော မဟူရာတောလေးက သူမ၏ ရတနာသိုကျတံခါးကို စိုးစိမြှ မမွငျရလအေောငျ ဖုံးကှယျထားသညျ..။ လကျဖကျရညျကွမျး ပုဂံသာသာမြှ သူမ၏ နို့တငျးတငျးလေး နှဈလုံးက မူလက ဖှေးအုနပေမေယျ့ လှဦးရဲ့ ကိုငျတှယျညှဈနယျမှုကွောငျ့ နီရဲ၍ နသေညျ..။ အပြိုနို့သီးသေးသေးလေးတှကေ မွငျရုံဖွငျ့ သိသာလောကျအောငျ ထောငျထ၍ နခေပြွေီ…။ ပေါငျကွားမှ အင်ျဂါစပျကိ စမျးကွညျ့စရာ မလို..။ နို့သီးတှေ မာ၍ ထောငျလာလငျြ ထိုမိနျးမ စပျယှကျခံရနျ အသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုတာ လှဦး သိပွီးသာ…။ အိပျယာခွရေငျးတှငျ လဲကနြသေော နှငျးအိအား လှဦးက ဖကျ၍ အိပျယာပျေါ ဆှဲတငျလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ ဖကျထားလကျြက နှငျးအိရဲ့ နို့ကို ကုနျး၍ စို့ပေးလိုကျသညျ..။
“အ….အ..ဟ….ကြှတျ ကြှတျ…“ ကောငျမလေး နာသှားတာတော့ မဖွဈနိုငျ..။ နို့သီးကို လြှာဖြားလေးဖွငျ့ ထိုးယကျရငျး ဖှဖှလေး ကိုကျစို့ပေးလိုကျတာဖွဈသညျ..။ နာတာမဟုတျရငျ နှငျးအိ ခံရခကျသှားတာ ဖွဈပလေိမျ့မညျ..။ လှဦးရဲ့ လကျတဈဖကျက သူမ၏ ပေါငျကွားကို လှမျးလိုကျတော့ နှငျးအိက ပေါငျနှဈလုံးကို တငျးနအေောငျ စထေ့ားလိုကျသညျ..။ စောကျမှေးထူထူလေးတှကေို လကျဖဝါးဖွငျ့ ပှတျရငျး စောကျဖုတျအပျေါပိုငျး အသားခုံနုနုလေးကို သူ့လကျဖဝါး ကွမျးကွမျးကွီးဖွငျ့ ဆုတျ၍ဆုတျ၍ ညှဈညှဈပေးသညျ..။ နို့လေးနှဈလုံးကို ဘယျပွနျညာပွနျ ဇိမျဆှဲ၍ စို့ပေးရငျး လှဦး နှငျးအိမကျြနှာကို လှမျး၍ ကွညျ့သညျ..။ အပြိုမလေး မကျြလုံးစုံမှိတျပွီး နှုတျခမျးလေးတှကေို တငျးတငျးစထေ့ားသညျကို တှရေ့သညျ..။
လှဦးက သူ့လကျကို ပေါငျကွားသို့ မသိမသာ ထိုးသှငျးကွညျ့သညျ..။ ပေါငျနှဈလုံးက စထေ့ားသျောလညျး စောစောကလို တငျးတငျးကွီး မဟုတျ..။ ဒါကွောငျ့ ပေါငျလေးထဲ လကျကို ဆတျခနဲ ထိုးသှငျးလိုကျတော့ သတိ၇သှားသော နှငျးအိက ပေါငျကို တငျးတငျးကွီး ပွနျစလေို့ကျသညျ..။ လှဦး၏ လကျတဈခုလုံး ပေါငျကွားသို့ ဝငျမသှားသျောလညျး လကျညှိုးနှငျ့ လကျခလယျကတော့ ပေါငျကွားတှငျ တိတိပပကွီး ညှပျ၍ သှားသညျ..။ ညှပျသှားတာမှ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသား နှဈခုကွား အကှဲကွောငျးနှငျ့ ကပျလကျြဖွဈသညျ..။ စောကျစငေု့တျလေးထှကျနတောကိုတောငျ ထိမိနရေသညျ..။
နို့စို့နရေကျက ပေါငျကွားထဲတှငျ ညှပျနသေော သူ့လကျညှိုး လကျခလယျတို့ကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ရှတေို့းနောကျငငျ လုပျပေးသညျ..။ ထိုအခါ အပွငျသို့ထှကျပျေါနသေော စောကျစငေု့တျကလေးကို ဆှဲဆှဲပှတျသလို ဖွဈ၍ နသေညျ..။ မကွာလိုကျ…. “အငျး…ဟငျ့……“ နှငျးအိနှုတျဖြားမှ အသံလေးထှကျသှားပွီး နှငျးအိပေါငျနှဈဖကျမှာ ဟတယျဆိုရုံလေး ဟသှားသညျ..။ လှဦး၏ လကျဖဝါးတဈခုလုံး ပေါငျကွားသို့ ရောကျသှားသညျ..။ စောကျဖုတျမကျြနှာစာကို လကျဖဝါးဖွငျ့ အုပျကာ အကိုငျလိုကျ ရှဲ၍နသေော အရညျတှကေို စမျးမိလိုကျသညျ..။ လှဦးလကျညှိုး စောကျခေါငျးထဲသို့ တဖွေးဖွေး တိုးဝငျသှားသညျ..။ ပွီးတော့ နို့သီးလေးတှကေို နှုတျခမျးဖွငျ့ ဖိကွိတျရငျး လကျညှိုးကို စောကျခေါငျးထဲသို့ ထိုးသှငျးလိုကျ ပွနျနှုတျလိုကျ လုပျပေးသညျ..။
နှငျးအိ မခံနိုငျ….။ “အ..အ…အငျး…..ကမြပွနျပါရစတေော့…အဟငျး…..မဟုတျရငျလဲ အသသော…သတျလိုကျပါတော့….ရှငျ…ဟငျ့…ဟငျ့…..“ နှငျးအိ၏ အသံက စောစောကလို ဒေါသသံ မဟုတျ.၊ မောသံဖွငျ့ စကားကို မနဲ အားယူ ပွောနရေပွီး တောငျးပနျခယသံ ဖွဈသညျ..။ လှဦး ပွုံးလိုကျပွီး နှငျးအိရဲ့ ကိုယျပျေါလှိမျ့တကျလိုကျရာမှ ပေါငျနှဈလုံးကို ဆှဲဖွဲလိုကျသညျ..။ နှငျးအိ မကျြလုံးအစုံကို မှိတျထားပွီး နှုတျခမျးလေးတှကေို တငျးနအေောငျ စထေ့ားသညျ..။ လှဦးက သူ့လီးကို လကျတဈဖကျမှ ကိုငျ၍ စောကျပတျဝကို တပွေီ့း ဆတျခနဲ ထိုးသှငျးလိုကျသညျ..။
အမေ့…..အငျ့……“ နှငျးအိမကျြနှာလေး မော့ပွီး သှေးကွောလေးတှေ ထောငျသှားသညျ..။ လီးထိပျခေါငျးတဈခုလုံး ဝငျသှားပွီ..။ ခေါငျးဝငျမှတော့ ကိုယျဆနျ့ပွီပေါ့…။ လီးကို ထပျ၍ စိတျရှညျလကျရှညျ ဖိဖိသှငျးသညျ..။ “ဗွဈ…အိုး….ပွှတျ…ဖှတျ……အား…အီး…..ဗွဈ ဗွဈ…အား..အား…“ လှဦး အောကျသို့ ငုံ့ကွညျ့သညျ..။ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားလေး နှဈခုက သူ့လီးကွီးကို မဆနျ့မပွဲ ငုံကာ လကျခံနသေညျ..။ လီးက တဈဝကျသာသာတော့ ဝငျသှားပွီ..။ လှဦး နှငျးအိရဲ့ မကျြနှာလေးကို လှမျး၍ ကွညျ့လိုကျသညျ..။ မကျြနှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ ခံနိုငျအောငျ ခံမညျဟု ဆုံးဖွတျထားသညျ့ ပုံပေါကျနပေါသညျ..။ လှဦး တဖနျ ဆောငျ့၍ လီးကို ဆတျခနဲ သှငျးလိုကျပွနျသညျ.။
“ဗွဈ….ဗွဈ…..ဘှတျ……အီး…..အငျ့…….အငျး………………“ နှငျးအိ သံရှညျလေးဖွငျ့ ငွီးလိုကျရငျး ပေါငျနှဈဖကျက အစှမျးကုနျကား၍ ထှကျသှားသညျ..။ အထဲမှာ အရညျတှကေ အတျောကွီး ရှဲ၍ ထှကျနသေညျ..။ လှဦး သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို ကုနျး၍ စို့လိုကျပွီး ကနျြနသေော လီးကို ဖိဖိပွီး သှငျးလိုကျသညျ..။ “ပွှတျ….ပွှတျ….ဗွဈ….ဒုတျ…..အငျ့……အီး……“ နှငျးအိ ခါးလေး ကော့တကျသှားသညျ..။ သူ့လီးကွီးက စောကျဖုတျလေးထဲမှာ မဆနျ့မပွဲကွီး ပွညျ့သိပျ၍ နသေညျ..။ နှငျးအိ ခါးနာသော ဝဒေနာ ဘယျရောကျသှားမှနျးတောငျ မသိလိုကျတော့..။ အထဲတှငျ ပွညျ့သိပျကွပျညှပျစှာ ရောကျနသေော သူ့လီးကွီးကို အားမလိုအားမရဖွငျ့ ဆှဲဆှဲပွီး ညှဈနမေိသညျ..။
သူမကို သူမတော့ ဘာတှေ လုပျမိနမှေနျး မသိ….။ “ကောငျးလိုကျတာ….နှငျးအိ…ရယျ….“ တဈကိုယျလုံး ဆိမျ့တကျသှားသော လှဦးက တိုးတိုးလေး ငွီးလိုကျရငျး နှငျးအိ ၏ စောကျခေါငျးကဉျြးကဉျြးလေးထဲသို့ မခြိမဆနျ့ တဆုံးတိုငျ ဝငျနသေော သူ့လီးကွီးကို ထပျ၍ ဖိသှငျးသညျ..။ “အို့……အဈကိုကလဲ…ဟငျး……အ….အို…….“ တဆုံးဝငျ၍နသေော လီးကို ထပျ၍ဖိသှငျးလိုကျတော့ လီးက ထပျ၍ မဝငျတော့ပဲ လီးအရငျးနှငျ့ စောကျပတျဝ ဖိလိုကျမိသညျ့ ဒဏျက ယောကျြားအားနှငျ့ဆိုတော့ နှငျးအိ အတျောလေး ခံစားသှားရသညျ..။ “ခဈြလှနျးလို့ပါကှယျ……အားမရဘူး….တှေးအိရယျ….“ “ဟှနျး…..ဘာမှနျးလဲ ..မသိဘူး…….“ တှေးအိက နှုတျခမျးလေး စူ၍ အမူပိုပိုလေးပွောလိုကျသညျ..။
လှဦးက သူ့လီးကို ဆှဲထုတျ၍ ဖငျကွီးကို ကွှကာ ကွှကာနဲ့ လိုးသညျ..။ “ဗွဈ…အား….အငျး….ဟငျး…ဟငျး…………..“ နှငျးအိ မကျြလုံးလေးတှေ မဖှငျ့တော့ပဲ ဆောငျ့ခကျြနှငျ့ အညီ သူမ၏ ဦးခေါငျးလေးက ဘယျညာ ခါယမျးနတေော့သညျ..။ ဒါတငျမက နှငျးအိ ဖငျဖှေးဖှေးကွီးတှကေ လညျး လုံးခနဲ လုံးခနဲ ဖွဈလို့လာသညျ..။ “ဗွဈ….ဗွဈ….ပလှတျ…..ပွဈ….“ “အငျး…အဈကိုရယျ ခုမှ နှငျးအိတို့ ဘယျလိုဖွဈရတာလဲ….အငျး….ဟငျး…..“ နှငျးအိ အလူးအလဲ ခံစားနရေသညျ့ကွားက သူမသိခငျြသော အရာကို အားယူ၍ မေးသညျ.. ။
အငျး…အီး…..အား……အဈကို အေးမိနဲ့ မရခငျကတညျးက နှငျးအိကို သဘောကနြတော…တဈနတေ့ော့ မဖွဈ ဖွဈအောငျ ခဈြဖို့ ဆုံးဖွတျထားတာ…. “အဈကိုရယျ…..“ “ဒါပမေယျ့ အဈကို နှငျးအိရဲ့ စိတျကို နားလညျတယျ…. ဒီတဈခါ ပဲ ခဈြ လိုကျရရငျ တျောပါပွီ……..“ “ဟငျ……….“ နှငျးအိက ဟငျခနဲ ဖွဈကာ သူ့ကို အလနျ့တကွား မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ..။ ပွီးတော့ သူမ၏ ခေါငျးကို ရမျးကာ မကျြလုံးနှဈလုံးကို ပွနျ၍ ပိတျထားလိုကျသညျ..။ ခဏအတှငျး မကျြလုံးဒေါငျ့စှနျးမှ မကျြရညျစလေးမြား စို့၍ ထှကျလာသညျ..။ လှဦးက ဒူးထောငျ၍ လိုးနရောမှ သူမ၏ ကိုယျပျေါသို့မှောကျခကြာ နို့လေးနှဈလုံးကို ဘယျပွနျညာပွနျ စို့ရငျး ဖငျကို ကွှကွှပွီး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးသညျ..။ နှငျးအိမှာ ဆောငျ့လိုးသညျ့ဒဏျရော လှဦး၏ ကိုယျလုံးကွီး ဖိထားသညျ့ဒဏျကိုပါ နှဈခုစလုံး ခံစားနရေသညျ..။ ဒါပမေယျ့ နှငျးအိ ကနြေပျနသေညျ..။
သူမ၏ ကိုယျပျေါသို့ မှောကျခထြားသော လှဦးကိုယျလုံးကွီးကို လကျလေးနှဈဖကျဖွငျ့ မိမိရရ ပွနျဖကျထားသညျ..။ “ဗွဈ ….အိုး… အဈကို့…….အီး..အား……“ နှငျးအိ သူမကိုယျ သူမ ဘယျလိုဖွဈသှားမှနျး မသိ…၊ လှဦး၏ ကိုယျလုံးကွီးကို အတငျးကွုံးဖကျပွီး အပျေါမှ ဖိထားသညျ့ကွားက သူမ၏ ခါးလေး အတငျးကော့တကျလာကာ တဈကိုယျလုံး ခါဆငျးသှားသညျ..။ နှငျးအိ ပွီးသှားပွီဆိုသညျကို သိလိုကျသော လှဦးကလညျး ခပျသှကျသှကျ အခကျြ ၂၀ ခနျ့ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးပဈလိုကျပွီး သုတျရတှေကေို ပနျးထညျ့လိုကျလသေညျ..။
အတနျကွာအောငျ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဖကျ၍ ငွိမျနကွေပွီးတော့မှ လှဦးက ဘေးသို့ ပကျလကျလှနျ၍ ခလြိုကျသညျ..။ နှငျးအိ သူမဘေးတှငျ ပကျလကျဖွဈသှားသော လှဦးကို တဈခကျြငဲ့စောငျး၍ ကွညျ့လိုကျပွီးမှ ထ၍ ထိုငျလိုကျသညျ..။ ထို့နောကျ လှဦးကို ကြောပေး၍ အဝတျအစားမြားကို ပွနျ၍ ဝတျသညျ..။ သူတို့နှဈယောကျ တဈယောကျကို တဈယောကျ စကားမပွောဖွဈကွခြေ…။ လှဦးက သူ့ကို ကြောပေး၍ အဝတျအစားမြား ဝတျနသေော နှငျးအိကို မကျြတောငျမခတျ နောကျမှ ကွညျ့နမေိသညျ..။ အကငြ်္ီတှေ ဝတျပွီးသှားတော့ နှငျးအိက နောကျဆုံး ထဘီကို ခွထေောကျမှ စှတျလိုကျပွီး မတျတတျထ၍ ရပျကာ ဝတျလိုကျသညျ..။ သူမတဈကိုယျလုံး သပျသပျရပျရပျ ပွငျဆငျပွီးတော့မှ အခနျးဝဖကျသို့ လှညျ့၍ အပွငျသို့ ထှကျသှားသညျ..။
နှငျးအိ လှဦးကို တဈခကျြလေးမှ လှညျ့မကွညျ့ပေ…။ အခနျးဝဖကျသို့ လှမျး၍ထှကျသှားသော နှငျးအိ၏ မကျြဝနျးတို့တှငျတော့ မကျြရညျမြား ဝိုငျးလကျြ ရှိသညျကို လှဦး အထငျးသား မွငျတှလေို့ကျရသညျ..။ နှငျးအိ အိမျရှကေို့ ရောကျတော့ သူမဖိနပျကို စီးပွီး အိမျအောကျသို့ ဆငျးလိုကျသညျ..။ အပွငျတှငျ မိုးက မသညျးတော့ပမေယျ့ စဲတော့ မစဲသေးခြေ…။ နှငျးအိ ဟိုဟိုသညျသညျ ရှာကွညျ့လိုကျတော့ ခမောကျတဈခုကို တှသေ့ဖွငျ့ ဆှဲ၍ ဆောငျးကာ မိုးဖှဲဖှဲကွားသို့ ထှကျလာခဲ့သညျ..။
နှငျးအိ ခွလှေမျး၍ လြှောကျလိုကျတိုငျး အထဲမှ အရညျတှကေ ပွနျ၍ ထှကျကလြာနသေညျ..။ လြှောကျရငျးနဲ့ ပေါငျကွားတဈခုလုံး စေးထနျးထနျး ဖွဈလာကာ လြှောကျရတာ ခကျခဲလာသညျ..။ လမျးလြှောကျရငျး နှငျးအိ ဘေးဘီကွညျ့၍ လူလဈတာနှငျ့ ပေါငျကွားထဲ လကျနှိုကျကာ ဝတျထားသော ထဘီနှငျ့သုတျပဈလိုကျသညျ..။ ထဘီတှငျ အကှကျလိုကျ စှနျးထငျး၍ သှားသညျ..။ ဒါပမေယျ့ ကိစ်စမရှိ..။ ခေါငျးပျေါတှငျ ဆောငျးထားသော ခမောကျက ခန်ဓကိုယျအပျေါပိုငျး လောကျသာ မိုးရကေို ကာကှယျပေးနိုငျပွီး မကွာမီမှာပငျ သူမ၏ ထဘီလေးတဈခုလုံး မိုးရတေို့ဖွငျ့ စိုစိုရှဲသှားမှာ သခြောလသေညျ.။
လှဦးနှငျ့ နှငျးအိ တို့ ကိစ်စကို အဈမဖွဈသူ မအေးမိ ပငျ မသိလိုကျ ။ သူတို့နှဈယောကျတညျးသာ သိထားကွသညျ..။ နောကျပိုငျးတှငျ လှဦးနှငျ့ နှငျးအိတို့ တဈယောကျကို တဈယောကျ တတျနိုငျသမြှ ရှောငျနကွေသညျ.. ။ မလှဲသာလို့ နှဈယောကျသား ဆုံမိကွလငျြ လညျး ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးကာ ပုံမှနျအတိုငျး ပွောဆိုဆကျဆံ ကွသညျ..။ နောကျပိုငျးတှငျ နှငျးအိက လှဦးကို အကဲခတျ ဆနျးစဈကွညျ့သညျ..။ လှဦးက သူမအပျေါ မရိုးသားသော အရိပျအယောငျမြား ဘာကိုမှ မတှရေ့သဖွငျ့ နှငျးအိ တဈမြိုး စိတျအေးရသညျ..။ ဒါပမေယျ့လညျး ခကျသညျက နှငျးအိဖွဈသညျ..။ သူမလိပျပွာ သူမ မလုံ ။ ပတျဝနျးကငျြက မသိ၍ ရိုကျခတျမှု မရှိသျောလညျး သူမကိုယျ သူမတော့ သိနတောက ခကျလှသညျ..။
ဒီအရိပျမညျးကွီးကို သူမစိတျထဲက ဘယျလိုမြား ဖြောကျဖကျြပဈရပါ့မလဲ ဆိုသော မေးခှနျးက နှငျးအိ သူမကိုယျကို ပွနျမေးမိနသေညျမှာ အကွိမျပေါငျး မရတှေကျနိုငျတော့ပေ…။ သူမ၏ ခန်ဓကိုယျက ညဈနှမျးနပွေီလားဆိုသညျ့ အတှေးက နှငျးအိရငျထဲတှငျ ခိုငျခိုငျမာမာ ကိနျးအောငျး၍ နသေညျ..။ ယခုလညျး ခြောငျးစပျရှိ တရုတျစကားပငျ သဈမွဈဆုံကွီးပျေါတှငျ ထိုငျရငျး သူမ၏ အရိပျမညျးကွီးကို ပွနျပွောငျး စဉျးစားမိနကော သကျပွငျးတှေ အခါခါ ခနြမေိသညျ..။ စဉျးစားပွီးသှားပွနျတော့ ပေါငျလေးတဈဖကျကို ဟ၍ လကျလေးတဈဖကျကို ပေါငျကွားထဲ သှငျးပွီး စောကျဖုတျလေးကို ထဘီပျေါမှ စမျးလိုကျမိသညျ..။
ဒီအရာက ဘာနှငျ့မှ ထိ၍ ရသော အရာ မဟုတျပါ..။ လကျဖွငျ့ ထိကိုငျပွီ ဆိုကတညျးက ထိုလကျကငျးကှာသှားမှာကို စောကျဖုတျလေးက မလိုလားသညျ့အပွငျ ထိထားသော ခုအနအေထားထကျ ပိုပွီး ဖိကပျပှတျသပျလာမှာကို လိုလား၍ နသေညျ..။ နှငျးအိ သူမလကျဖွငျ့ စောကျဖုတျလေးကို အသာလေး ဖိ၍ ပှတျသပျပေးနမေိသညျ..။ ပှတျရငျး ပေါငျနှဈခြောငျးက ပို၍ ကားသှားရသညျ..။ နှငျးအိထိုငျနသေော နရောက ရကေနျကွီး သုံးကနျ၏ ရှဖေ့ကျ ခြောငျးကမျးစပျတှငျ ဖွဈသညျ..။ သူတို့ရှာက ဒီခြောငျးလေး ကမျးပါးတဈလြှောကျ တညျထားသော ရှာကလေး ဖွဈသညျ..။
ကမျးစပျတှငျ လူသူကငျးရှငျးမှနျး သိတော့ နှငျးအိ ပို၍ ကဲလာသညျ..။ ထဘီအောကျနားစလေးကို အသာလေး ဆှဲတငျလိုကျပွီး ထဘီကွားထဲ လကျကို သှငျးကာ စောကျဖုတျလေးကို စမျးလိုကျပွနျသညျ..။ သူမ၏ ခဲအို လှဦးလုပျတာ ခံလိုကျရပွီးကထဲက ရိပျထားသော စောကျမှေးလေးတှကေ လကျတဈဆဈခနျ့ပငျ ပွနျ၍ ထှကျနကွေပွီ ဖွဈသညျ..။ ပထမဆုံး လကျဖြားလေးဖွငျ့ စောကျမှေးလေးတှကေို ပှတျသပျလိုကျပွီးမှ အကှဲကွောငျးမှ ငေါကျတောကျလေးထှကျနသေော စောကျစလေ့ေးကို လကျမထိပျဖွငျ့ တို့ထိ ကာ ပှတျပေးရငျး နှငျးအိ မကျြလုံးလေးမြား စငျး၍ ကလြာရသညျ..။ ရှာလမျးမကွီးပျေါမှ ခြောငျးဖကျသို့ ဆငျးလာပွီး လူတဈရပျလောကျ ပေါကျနသေော ဗြိုကျတောပငျ မြားကို ကြျောဖွတျလိုကျမညျ ဆိုပါက နှငျးအိကိ အတိုငျးသား မွငျရမညျ ဖွဈသညျ..။
စောကျပတျဝတှငျ စိုစိစိလေး ဖွဈနသေော အရညျလေးတှကေ စောကျစကေ့လေးကိုလညျး ထိလိုကျရော အပွငျသို့ စို့၍ ထှကျလာသညျ..။ နှငျးအိ စငျးကနြသေော မကျြလုံးနှဈလုံးကို မဖှငျ့တော့ပေ..။ လကျညှိုးလေးကို စောကျခေါငျးထဲသို့ အသာလေး ထိုးထညျ့လိုကျသညျ..။ ထှကျနသေော အရညျလေးတှကွေောငျ့ ခြောခြောခြူခြူ တဈခြောငျးလုံး ဝငျသှားသညျ..။ ဒီတော့ နှငျးအိက သူမ၏ လကျညှိုးကို စောကျခေါငျးထဲသို့ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ လုပျပေးသညျ..။ လကျကလှုပျနတေော့ နှငျးအိရဲ့ ကိုယျလုံးလေးမှာ တသိမျ့သိမျ့ လှုပျ၍ နသေညျ.. ။
ခဏအတှငျးမှာပငျ ဖွေးဖွေးလေး လှုပျရှားနသေော သူမ၏ လကျက သှကျသှကျလကျလကျ ကွီး လှုပျရှား၍ လာသညျ..။ နှငျးအိ မကျြလုံးလေးတှေ မှိတျထားရငျး နှုတျခမျးလေးက ဟ၍လာသညျ..။ “နှငျးအိ…“ “အမလေး…………..“ ချေါလိုကျသော အသံက တိုးတိုးလေး ဖွဈပမေယျ့ နှငျးအိ နားထဲတှငျ မိုးကွိုးပဈလိုကျ သညျဟုပငျ ထငျလိုကျရသညျ..။ ထဘီးကွားထဲ ထိုးသှငျးထားသော လကျ ကို ဆှဲထုတျလိုကျပွီး တပွိုငျနကျထဲမှာပငျ နှငျးအိ မကျြလုံး ဖှငျ့၍ ကွညျ့လိုကျသညျ..။ “ဟငျ……ဆရာလေး……“ ရှာမူလတနျးကြောငျးမှ ဆရာလေး ဝငျးကိုအား တှလေို့ကျရသညျ..။
နှငျးအိ မကျြလှာလေး ခကြာ ခေါငျးလေး ငုံ့သှားသညျ..။ သူနဲ့မှ ပကျပငျးတိုးရသတဲ့လား….။ နှငျးအိ ရှကျလိုကျတာ…မပွောပါနဲ့…။ ဖွဈနိုငျလငျြ ဒီနရောမှ ခကျြခငျြးထ၍ ပွေးသှားလိုကျခငျြသညျ..။ အမှနျတော့ နှငျးအိနှငျ့ ဆရာလေး ဝငျးကိုတို့က ရှလေ့ထဲတှငျ လကျထပျကွရနျ လူကွီးတှကေ သဘောတူပွီးကွတဲ့သူတှေ ဖွဈသညျ..။ ဆရာလေး ဝငျးကို နှငျ့ နှငျးအိတို့ ကွိုကျနကွေတာလညျး တဈနှဈကြျော ကွာခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ..။ ဒီနရောက သူတို့နှဈယောကျ တှနေ့ကြေ နရောလေး ဖွဈသညျ..။
ဝငျးကို နှငျးအိ အဖွဈအား တှလေို့ကျရတော့ သူ့ကိုသတိရပွီး နှငျးအိ လုပျခငျြတာ လုပျနသေညျဟု တှေးမိပွီး သနားသှားသညျ..။ ဝငျးကို နှငျးအိရဲ့ ပုခုံးနှဈဖကျကို ညငျသာစှာ ကိုငျ၍ သူမကို ဆှဲထူလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျး ၍ ဖှဖှလေး နမျးသညျ..။ မွတျနိုးယုယစှာ ညငျညငျသာသာနမျးလိုကျတာဖွဈပမေယျ့ နှငျးအိက ဒီလို နမျးတာကို အားမရနိုငျ..။ သူမ ပါးကို ထိုး၍ တိုးကပျပေးသညျ..။
“နှငျးအိ …အိမျကိုလိုကျခဲ့နျော..အိမျမှာဘယျသူမှမရှိပါဘူး… “ဟငျ့အငျး…မလိုကျခငျြဘူး..“နှငျးအိ သူ့ခါးကို ဖကျထားလကျြက သူ့ရငျခှငျထဲမှ ခေါငျးလေး ခါရမျး၍ ပွောသညျ..။“လိုကျခဲ့ပါလား နှငျးအိရာ… လှတျလှတျလပျလပျ တှရေ့တာပေါ့…“ဟငျ့အငျး…ရှလေ့ထဲဘဲ….လကျထပျတော့မယျ့ဟာ……“ဒါတော့..ဒါပေါ့…..ဒါပမေဲ့….“ဘာလဲ..နှငျးအိကို အထငျသေးသှားပွီလား..။ အဲဒါ နှငျးအိ တဈယောကျထဲ မဟုတျဘူး..ရှငျ့…မှတျထား….“ပွီးတော့မှ နှငျးအိက တိုးတိုးလေး…“မိနျးမတှကေ ဒီလိုပဲ….“ ဟု ပွောလိုကျသညျ..။“အျော….နှငျးအိရယျ……….ဝငျးကို နှငျးအိရဲ့ နဖူးလေးအား တဈခကျြနမျးလိုကျပွီး ခါးကိုဖကျကာ ရှာလမျးမကွီးပျေါသို့ အတ လြှောကျသှားလတေော့သညျ.……ပွီးပါပွီ။
စိမ်းမြကြည်လင်နေသော ချောင်းရေပြင်ကို နှင်းအိ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက် ကြွေကျလာသော စကားပွင့်ကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်လှုပ်ခါသွားပြီး ကြည်လင်သောရေ၌ ထင်ဟပ်နေသော နှင်းအိရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာမှာ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေး၍ လှုပ်ခါသွားရသည်..။ သူမ၏ ရုပ်လွှာမှာ ခုလို တကယ်ပဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေပြီလား…နှင်းအိ တွေးလိုက်မိသည်..။ ကြွေကျလာသော တရုတ်စကားပွင့် ဖြူဖြူလေးက ချောင်းရေပြင်တွင် အခိုက်အတန့်လေးသာ ရပ်တန့်သွားပြီးနောက် ရေစီးနှင့်အတူ မျောပါသွားသည်ကို နှင်းအိ လိုက်ပြီး ကြည့်နေမိသည်..။
တရုတ်စကားပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးက ရေစီးအတိုင်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး မျောပါသွားရသည် မဟုတ်..။ ရေစပ်တွင်ရှိသော သစ်မြစ်ဆုံများ ၊ ကျောက်တုံးများကို ကွေ့ပတ်ကာ မျောပါသွားရသည်..။ ပန်းပွင့်လေးက အရာဝတ္ထုတို့ကို လွယ်လွယ်ကူကူတော့ ကွေ့ပတ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်ပါ..။ ဆုံတွေ့သော အရာတို့ကို ရေစီးအရှိန်နှင့်အတူ တိုးတိုက်ထိခိုက်မိပြီးမှသာ ရေစီးနှင့် ပါသွားရခြင်း ဖြစ်သည်..။ နှင်းအိဘဝကရော တရုတ်စကားပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးလို ကြွေကျသွားခဲ့ပြီး အခု ရေစုန်မျောရတော့မှာလား…။ မျောချင်တိုင်းမျော ဆိုပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မျောချလိုက်ရင်လည်း လမ်းခုလတ်မှာ ကြုံတွေ့ရမည့် အပိတ်အပင် အတားအဆီးများနှင့် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်ဦးမလဲ မသိ..။
နှင်းအိရင်မှာ တင်းကြပ်လှသည်..ဒီလိုအတွေး ဒီလိုခံစားချက်တွေနှင့် နှင်းအိရင်ထဲ မွန်းကြပ်နေခဲ့ရတာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။ အမှန်တော့ အပြစ်ရှိသူက နှင်းအိရယ်ပါ..။ နှင်းအိက ဆတ်ဆော့ မိတာကိုး..။ သူ့ကိုရော အပြစ်မရှိဘူးလို့ ပြောလို့ရမလား..။ တကယ်ဆို သူက ကိုယ့်ထက် အသက် အများကြီး ကြီးတဲ့သူပဲ..။ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်တာပဲ..။ နှင်းအိက ဆတ်ဆော့အုံးတော့ သူက ဆင်ခြင်နိုင်တာပဲ..။ အို…ဒါမျိုးဆိုတာကလဲ အခက်သားကလား..။ စဉ်းစားဉာဏ်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားတတ်တာမျိုး မဟုတ်လား..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှင်းအိ သူ့ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့တော့ မရိုးစွပ်ချင်တာ အမှန်ပါ..။
တော်သေးသည်..တစ်နေ့မှ စိတ်မအေးခဲ့ရ..။ တွေး၍ ပူနေခဲ့ရသော ကိစ္စက အခု ၃ လကျော်လာတဲ့အထိ ဘာမှ ထူးခြားမှု ရှိမလာတော့ နှင်းအိ ပူပန်ရတာ တစ်မျိုး သက်သာသွားသည်..။ ဒါပေမယ့် အရိပ်မည်းကြီးက နှင်းအိနောက် ကပ်ပြီးလိုက်ပါနေသေးသည်..။ ဒီအရိပ်မည်းကြီးကတော့ ဘယ်တော့မှ ကင်းကွာသွားမလဲ မသိတော့ပါ..။ နှင်းအိ အမြဲတွေးနေမိတာက ငါဟာ ဟိုတုံးကလို သန့်သန့်စင်စင် မဟုတ်တော့ဘူး..ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီးက နှင်းအိရင်မှာ ဘယ်လိုမှ ပျောက်၍ မသွား…။ “ဟင်း………..“ နှင်းအိ သက်ပြင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြီး ချလိုက်သည်..။ပြီးတော့ ချောင်းရေပြင်ထက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်မိပြန်သည်..။
ရေပြင်တွင် ထင်ဟပ်နေသော သူမ၏ ပုံရိပ်က ပကတိ ကြည်လင်သန့်စင်လို့ နေသည်..။ ကျစ်ဆံမြီးလေးနှစ်ချောင်း ဘယ်ညာချ၍ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း နှာတံပေါ်ပေါ် မျက်ဆံကြီးကြီး လေးနှင့် သူမ၏ ရုပ်လွှာက ဘာမှ ပြောင်းလဲ မသွား ။ ပါးလေးနှစ်ဖက်တောင် မသိမသာလေး ပို၍ ဖောင်းလာပြီး အရင်ကထက်ပင် ပိုပြီး လှလာသယောင် ထင်မှတ်ရသည်..။ ဒါပေမယ့် နှင်းအိရင်ထဲမှာတော့ သူမကိုယ် သူမ ညစ်နွမ်းနေပြီ ဆိုသည့် အစွဲအလန်းကြီးက ရင်ထဲမှာ အမြဲ မွန်းကြပ်နေရသည် မဟုတ်ပါလား..။ အဲဒီနေ့ အဲဒီအဖြစ်ပျက်ကိုလည်း နှင်းအိ တစ်သက်လုံး မေ့လို့ရလိမ့်မည် မဟုတ်တော့ပါ..။
မှတ်မှတ်ရရ နှင်းအိ ၁၈ နှစ် တင်းတင်းပြည့်တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဝါခေါင်လဆန်း (၁၀) ရက်နေ့ကပေါ့..။ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း နှင်းအိ အမြဲ လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခု ရှိသည်..။ ညနေစောင်းတွင် ရွာဦးစေတီသို့ သွား၍ ပန်းနှင့် ဆီမီး ကပ်လှူသည့် အလေ့အထလေးပင် ဖြစ်သည်..။ ရွာဦးစေတီက ရွာနှင့် တဆက်တစပ်တည်း ရှိသည်မဟုတ်ပါ..။ ရွာတန်းရဲ့ ထိပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းကြီးရှိသည်..။ ကျောင်းဝန်း အလွန်တွင် ရေကန်ကြီး သုံးကန်ရှိသည်..။ ထိုရေကန်ကြီးများကို လွန်၍ ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်သွားပါမှ ရွာဦးစေတီသို့ ရောက်သည်..။ ရွာဦးစေတီ၏ ပရဝုဏ်ဘေးတွင် ရွာဦးနတ်စင်များ ရှိသည်..။
အခါကြီးရက်ကြီးနေ့များတွင် ရွာဦးစေတီတွင် လူစည်ကားပြီး နေတတ်ပေမယ့် ကျန်ရက်တွေမှာတော့ လူသူ ကင်းရှင်း၍ နေတတ်သည်..။ နှင်းအိ ရွာဦးစေတီကို ရောက်၍ ပန်း ၊ ဆီမီးများ လှူဒါန်းကာ ဆုတောင်းသည်..။ ပြီးတော့ ညနေဆည်းဆာချိန်တွင် ရွာဦးစေတီမှ ကြည့်လျင် လယ်ကွင်းများ ၊ ရွာမှ အိမ်တန်းများ ၊ လယ်ကွင်းတွေ အလွန် ခြံများနှင့် ရှုခင်းမှာ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှသဖြင့် နှင်းအိ ချက်ချင်း မပြန်သေးပဲ ရွာဦးစေတီ၏ တံတိုင်းမုခ်ဝ တွင်ရှိသော အုတ်ခုံကြီးပေါ်သို့ တက်ကာ ခဏထိုင်နေလိုက်သည်..။ နှင်းအိ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းတွေကို ကြည့်၍ မဆုံးမီမှာပင် မိုးစက်မိုးပေါက်တွေက ကျရောက်လာတော့သည်..။ နှင်းအိ အုတ်ခုံပေါ်မှ ခုန်ဆင်းပြီး လှမ်းအထွက်လိုက် မိုးက ပိုသည်းလာသည်..။
နှင်းအိတွင် ခမောက်လည်း မပါ.၊ ထီးလည်း မပါချေ..။ ရွာဘက်သို့ နှင်းအိ ခပ်သုတ်သုတ်လေး လျှောက်ပြန်လာခဲ့သည်..။ မိုးက မစဲဘဲ သည်းမြဲ သည်းလို့နေသည်..။ နှင်းအိတစ်ကိုယ်လုံး စိုရွှဲ၍ နေပြီ..။ ရေကန်ကြီးများနား အရောက် နှင်းအိ ချမ်း၍ တုန်လာသည်..။ တစ်ချက်တစ်ချက် တိုက်လိုက်သော လေက ချမ်းအေးလှသည်..။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းကြီးကို လွန်၍လာသည်..။ နောက်ထပ် ဆယ်မိနစ်ခန့် လျှောက်လျင် အိမ်သို့ ရောက်တော့မည်..။ အားတင်း၍ ဆက်လျှောက်ပါက လျှောက်နိုင်သည်..။ ဒါပေမယ့် နှင်းအိ မလျှောက်ချင်တော့..။
ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအလွန်နားတွင် နှင်းအိတို့ အစ်မ မအေးမိတို့ ခြံရှိသည်..။ နှင်းအိအစ်မဖြစ်သူ၏ ခြံထဲသို့ ပြေးဝင်ခဲ့သည်..။ “ဟာ…နှင်းအိ..ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ…မိုးရွာထဲကြီး…သွား သွား..အိမ်ပေါ်တက်..နင့်အစ်မ အဝတ်တွေနဲ့ လဲထားလိုက်…“ “ဟို….ဟို ..ရွာဦးစေတီက…ပြန်လာတာ….“ နှင်းအိ အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်လျင် အိမ်ရှေ့ကုန်းထဲ၌ အင်္ကျီမပါ ကျောပြောင်ကြီးဖြင့် နွားစာစဉ်းနေသော သူမ၏ ခဲအို ကိုလှဦးက လှမ်း၍ ပြောသည်..။ လှဦး ညနေတိုင်း သောက်တတ်သည်..။ လှဦးကို ပြန်ပြောသော နှင်းအိအသံက ချမ်းလွန်းသဖြင့် လေက သိပ်ပြီး မဆက်ချင်..။ နှင်းအိ ရေစိုကြီးနဲ့ပင် အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာခဲ့သည်..။
“နင့်အစ်မ နဲ့ သံချောင်းတော့ နင်တို့အိမ်ကို သွားတယ်..၊ မိုးတိတ်မှ ပြန်လာမယ်နဲ့ တူတယ်..“ အိမ်ရှေ့မှ လှမ်းပြောလိုက်သော လှဦးအား နှင်းအိဘာမှ ပြန်၍ မပြောမိ..။ သံချောင်းဆိုတာက ၄ နှစ်သာရှိသော သူမ၏ တူလေးဖြစ်သည်..။ မီးဖိုချောင် နောက်ဘက် နံရံတွင် ဝါးထရံကြား၌ ညှပ်၍ လှန်းထားသော အစ်မဖြစ်သူ၏ ထဘီတစ်ထည်ကို ဆွဲယူ၍ ရေစိုအဝတ်နှင့် လဲကာ ဝတ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ ရေစိုနေတဲ့ ထဘီကို ညှစ်ကာ နံရံရှိ ဝါးတန်းကြား၌ ညှပ်၍ ပြန်လှန်းလိုက်သည်..။ ထို့နောက် သူမ၏ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှ အင်္ကျီများကို ချွတ်၍ ထဘီကို ရင်လျားပြီး အခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်..။ အခန်းထဲရှိ ကြိုးတန်းပေါ်မှ အစ်မဖြစ်သူ၏ အင်္ကျီများထဲမှ တစ်ထည်ကို ဆွဲယူလိုက်သည်..။
ဘော်လီတော့ မဝတ်တော့..။ အင်္ကျီ ခပ်ထူထူ လေးပဲ ဝတ်ပြီး ပြန်မည်ဟု တွေးကာ နှင်းအိ အခန်းပေါက်ကို ကျောပေးပြီး ရင်လျားထားသော ထဘီကို ခါးသို့ လျှော၍ ဝတ်လိုက်သည်..။ နှင်းအိရဲ့ ခန္ဓကိုယ် အပေါ်ပိုင်း တစ်ခုလုံး ဘာအဝတ်အစားမှ မရှိပဲ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားသည်..။ နှင်းအိ လက်ထဲမှ အင်္ကျီကို ဝတ်ရန် လက်နှစ်ဖက် ပင့်မြှောက်ကာ ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် အင်္ကျီလက်ပေါက်ကို အစွပ်…… “အမ..လေး…..ဟင်..အစ်ကို လှဦး….လွှတ်…လွှတ်ပါ…..“ သူမ၏ နောက်မှ နေ၍ တစုံတယောက်က သိုင်းဖက်လိုက်သဖြင့် နှင်းအိ ကြောက်အားလန့်အား လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လှဦးကို တွေ့လိုက်ရသည်..။
ကြောက်လန့်စွာဖြင့် နှင်းအိက ရုန်းလိုက်ပေမဲ့ မြဲမြံလှတဲ့ လှဦးရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က သူမကို အတင်းညှစ်၍ ဖက်ထားသလို လှဦး လက်ဖဝါးတစ်ဖက်ကလည်း သူမ၏ နို့လေးတစ်ဖက်ကို အုပ်ကိုင်ကာ ဖွဖွလေး ဆုပ်နယ်နေသည်..။ လှဦးထံမှ အရက်နံ့က နှင်းအိ ခေါင်းပင် ကိုက်ချင်လာသည်..။ နှင်းအိ အတင်းရုန်းသည်..။ သူမခန္ဓကိုယ်က လှုပ်၍ပင် မရချေ..။ “လွှတ်ပါ….အစ်ကိုလှဦး…ရှင်…ခွေးကျင့်ခွေးကြံ …မကြံ နဲ့…အစ်မ နဲ့ ပြန်တိုင်ပြောမှာ….နော်…“ “နှင်းအိကလဲ ဟာ..ခုဟာက ဘယ်သူမှ သိတာမှ မဟုတ်တာ…နင့်အစ်မ ပြန်တိုင်လိုက်လို့ အေးမိ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လုပ်မှ….နင်ပဲ..အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်….“ “အို..အို….မသိဘူး….လွှတ်…လွှတ်….ဟင့်…..အဟင့်..အီး…ဟီး….“ နှင်းအိ ငိုချလိုက်သည်… ။
လှဦးကတော့ တပြားသားမှ မလျှော့ပါ..။ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် နှင်းအိကိ နောက်မှ ကြုံး၍ ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က နှင်းအိ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ပင် ကိုင်၍ ဆုပ်နယ်နေပါသေးသည်..။ နှင်းအိတစ်ကိုယ်လုံး အပူလှိုင်းတို့က တဖြေးဖြေး ရစ်ပတ်လို့ လာသည်..။ နှင်းအိ သူ့ကို ဘာမှ မပြောနိုင်တော့…။ ငိုမြဲ ငိုလျက်သာ ရှိသည်..။ “အီး..ဟီး ဟီး…ဟီး…ဟင့်….အီး….ဟီး……“ ပြီးတော့ လှဦးက နှင်းအိရဲ့ မွှေးညှင်းနုနုလေးတွေ ပေါက်နေသော ဂုတ်ပိုးသား နုနုဖွေးဖွေးလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိစုပ်၍ ဒလစပ်ပင် နမ်းနေသည်..။
ထိုသို့ နမ်းရင်း သူ့လျှာဖျားဖြင့် ဂုတ်ပိုးသားလေးတွေကို ထိုးထိုးပြီး ယက်လိုက်သေးသည်..။ နှင်းအိ ဒူးတွေ မခိုင်တော့ ၊ ညွှတ်၍ ကျချင်လာသည်..။ နှင်းအိ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့.. ။ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုလဲ မစဉ်းစားနိုင်တော့..။ တစ်ကိုယ်လုံး ရစ်သိုင်း၍လာသော ဖိန်းရှိန်းလို့ လာသော အပူလှိုင်း ခံစားချက်တို့သာ အာရုံက ရောက်၍ရောက်၍ လာသည်..။ တဟီးဟီး ငိုသံလေးက တဖြေးဖြေး ပျောက်၍ သွားပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် ရှိုက်သံလေးများနှင့် အတူ မျက်ရည်များကတော့ တစိမ့်စိမ့် ထွက်နေဆဲ..ဖြစ်သည်..။ “ဟင်…မလုပ်နဲ့…..မလုပ်နဲ့…..လို့….“ နှင်းအိ လှမ်းဆွဲလိုက်ပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီ..။
ခါးတွင် ဖြစ်သလို ပတ်ထားသော ထဘီလေးက ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားသည်..။ ဒီမှာတင် နှင်းအိ နို့လေးတွေပေါ်မှ သူ့လက်ကြီးက နှင်းအိရဲ့ တင်သားဖွေးဖွေးကားကားကြီးများ အပေါ် ရောက်သွားပြီး ညှစ်နယ်ပါတော့သည်..။ “အိ…အိ…မလုပ်ပါနဲ့….ဟင့် ဟင့်……“ သူ့လက်ဖဝါးကြမ်းကြမ်းကြီးက နှင်းအိရဲ့ တင်သား ဖွေးနုနုကြီးတွေကိ အားရပါးရ ဆုပ်နယ်နေလိုက်တာ နှင်းအိကိုယ်လေးပင် ရှေ့သို့ ငိုက်ငိုက်ကျ သွားရသည်..။ နှင်းအိကို မြဲမြံစွာ ထိန်ချုပ်ဖက်တွယ်ထားသော သူ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကတော့ နှင်းအိကိုယ်လေးကို မလွှတ်…။ တင်းတင်းကြီး ဖက်ထားမြဲ….။ ခက်တာက နှင်းအိ ဖင်ကိုင် မခံနိုင် ခြင်းပင် ဖြစ်သည်…။
နောက်မှ တင်သားကြီးတွေကို အကိုင်ခံရလျင် အရှေ့က ဟာလေးက တရွရွဖြစ်လာကာ ဖောင်းထလာတတ်သည်..။ “အို အို….မလုပ်နဲ့…တော်တော့….တော်ပါ တော့ဆို….ဘာတွေမှန်းလဲ… မသိဘူး….တော်….တော့…အို့..အို့…“ နှင်းအိ တောင်စဉ်ရေမရ ဘာတွေ ပြောလို့ ပြောမိမှန်း မသိတော့…။ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသော နှင်းအိ ရုန်းကြည့်ပြန်သည်..။ သူမ၏ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓကိုယ်လေးက လှုပ်၍ပင် မရအောင် သူ့လက်ကြီးက ခိုင်မြဲ သန်စွမ်းလှသည်..။ “နှင်းအိကလဲ ဟာ..အလကား အပင်ပန်းခံပြီး ရုန်းနေသေးတယ်..ဘယ်သူ သိတာမှတ်လို့..“ “အစ်မတို့ ..ပြန်…လာရင် ခက်မယ်…..“ “ဟဲ..ဟဲ…နင့်အစ်မနဲ့ နင့်တူက ငါသွားခေါ်မှ ပြန်လာမှာဟ… ကဲ..လာပါ ဟာ..“ လှဦးက နှင်းအိကိုယ်ပေါ်မှ ဖက်ထားသော သူ့လက်ကြီးကို ဖယ်လိုက်ပြီး အိပ်ယာထဲ ဆွဲ၍ ခေါ်သည်..။
ခြေတစ်လှမ်းစာမျှ ဝေးသော အိပ်ယာဆီသို့ နှင်းအိ ကိုယ်လုံးလေး ရောက်၍အသွား လှဦးက လက်တစ်ဖက်မှ နှင်းအိကို ကိုင်ထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်..။ “ဟာ….“ နှင်းအိမြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်ရသေးသည်..။ တစ်မိုက်လောက် ရှိသော သူ့ဟာကြီးက အကြောတွေ အပြိုင်းပြိုင်းထလျက် တန်းမတ်နေသည်..။ ထိပ်ကြီးက အိမ်ရှေ့မန်ကျည်းပင်ကြီးတွင် တွေ့ရသော ပုတ်သင်ညိုအကောင်ကြီး၏ ခေါင်းကြီးလောက် ရှိသည်..။ ပြီးတော့ ပုတ်သင်ညိုခေါင်းလို တဆတ်ဆတ် ငြိမ်ကလျက် နှင်းအိကို ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်နေသလို ဖြစ်နေသည်..။
နှင်းအိ သူ့ဟာကြီးကို ကြည့်မိရင်း ခဏမျှ ငိုင်ကျသွားသည်..။ ထိုခဏမှာပင် လှဦးက အိပ်ယာပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူမကိုပါ ဆွဲထိုင်ချလိုက်သည်..။ နှင်းအိတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်လေး ဖြစ်အသွား နှင်းအိကို ဖက်၍ လှဲချလိုက်တော့မည် အလုပ် နှင်းအိတစ်ယောက် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပဲ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ ရှိသော ထဘီကို လှမ်းဆွဲကာ ဆတ်ခနဲ ထ၍ ပြေးသည်..။ “ဖုန်း….အ..မလေး.သေ ပါပြီ….“ ဘယ်ရမလဲ..လှဦးကလဲ နပ်ပြီးသား..၊ ရှေ့ရောက်မှတော့ လက်လွတ်မခံနိုင်ပေ..။ နှင်းအိထ၍ အပြေး သူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိုး၍ ခြေဂလန့် ထိုးခံလိုက်တော့ နှင်းအိ ဝုန်းခနဲ ပစ်လဲကျသွားတော့သည်..။
“အား….အီး…အ…..နာလိုက်တာ….“ နှင်းအိ ခါးလေးကို လက်ဖြင့် နှိပ်ရင်း ငြီးတွားနေရာမှ ထ၍ထိုင်ရန် ကြိုးစားလိုက်သည်..။ “နှင်းအိကလဲဟာ…နင်က အသားနာခံချင်တာကိုး…အလကား အချိန်တွေ ကြာနေတယ်… အသားလဲ နာတယ်…ငြိမ်ငြိမ် သက်သက် နေလိုက်ရင် ခုလောက်ဆို နင် အိမ်ပြန်လို့ရသွားပြီ…“ နှင်းအိ ထထိုင်ရန် ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ခါးက အတော်နာနေသဖြင့် မထိုင်နိုင်တော့ပါ..။ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ရင်းသာ လက်တစ်ဖက်က ခါးကို နှိပ်နေရသည်..။ နှင်းအိ ပုံစံလေးက တစောင်း မကျတကျ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်နေပြီး ပေါင်ဖြူဖြူလေးတစ်ဖက်က ကြွ၍ နေသည်..။
ပေါင်ကြားမှ အုပ်ဆိုင်းနေသော မဟူရာတောလေးက သူမ၏ ရတနာသိုက်တံခါးကို စိုးစိမျှ မမြင်ရလေအောင် ဖုံးကွယ်ထားသည်..။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ပုဂံသာသာမျှ သူမ၏ နို့တင်းတင်းလေး နှစ်လုံးက မူလက ဖွေးအုနေပေမယ့် လှဦးရဲ့ ကိုင်တွယ်ညှစ်နယ်မှုကြောင့် နီရဲ၍ နေသည်..။ အပျိုနို့သီးသေးသေးလေးတွေက မြင်ရုံဖြင့် သိသာလောက်အောင် ထောင်ထ၍ နေချေပြီ…။ ပေါင်ကြားမှ အင်္ဂါစပ်ကိ စမ်းကြည့်စရာ မလို..။ နို့သီးတွေ မာ၍ ထောင်လာလျင် ထိုမိန်းမ စပ်ယှက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ လှဦး သိပြီးသာ…။ အိပ်ယာခြေရင်းတွင် လဲကျနေသော နှင်းအိအား လှဦးက ဖက်၍ အိပ်ယာပေါ် ဆွဲတင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ဖက်ထားလျက်က နှင်းအိရဲ့ နို့ကို ကုန်း၍ စို့ပေးလိုက်သည်..။
“အ….အ..ဟ….ကျွတ် ကျွတ်…“ ကောင်မလေး နာသွားတာတော့ မဖြစ်နိုင်..။ နို့သီးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ထိုးယက်ရင်း ဖွဖွလေး ကိုက်စို့ပေးလိုက်တာဖြစ်သည်..။ နာတာမဟုတ်ရင် နှင်းအိ ခံရခက်သွားတာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်..။ လှဦးရဲ့ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ပေါင်ကြားကို လှမ်းလိုက်တော့ နှင်းအိက ပေါင်နှစ်လုံးကို တင်းနေအောင် စေ့ထားလိုက်သည်..။ စောက်မွှေးထူထူလေးတွေကို လက်ဖဝါးဖြင့် ပွတ်ရင်း စောက်ဖုတ်အပေါ်ပိုင်း အသားခုံနုနုလေးကို သူ့လက်ဖဝါး ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြင့် ဆုတ်၍ဆုတ်၍ ညှစ်ညှစ်ပေးသည်..။ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဇိမ်ဆွဲ၍ စို့ပေးရင်း လှဦး နှင်းအိမျက်နှာကို လှမ်း၍ ကြည့်သည်..။ အပျိုမလေး မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တင်းတင်းစေ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်..။
လှဦးက သူ့လက်ကို ပေါင်ကြားသို့ မသိမသာ ထိုးသွင်းကြည့်သည်..။ ပေါင်နှစ်လုံးက စေ့ထားသော်လည်း စောစောကလို တင်းတင်းကြီး မဟုတ်..။ ဒါကြောင့် ပေါင်လေးထဲ လက်ကို ဆတ်ခနဲ ထိုးသွင်းလိုက်တော့ သတိ၇သွားသော နှင်းအိက ပေါင်ကို တင်းတင်းကြီး ပြန်စေ့လိုက်သည်..။ လှဦး၏ လက်တစ်ခုလုံး ပေါင်ကြားသို့ ဝင်မသွားသော်လည်း လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ်ကတော့ ပေါင်ကြားတွင် တိတိပပကြီး ညှပ်၍ သွားသည်..။ ညှပ်သွားတာမှ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်းနှင့် ကပ်လျက်ဖြစ်သည်..။ စောက်စေ့ငုတ်လေးထွက်နေတာကိုတောင် ထိမိနေရသည်..။
နို့စို့နေရက်က ပေါင်ကြားထဲတွင် ညှပ်နေသော သူ့လက်ညှိုး လက်ခလယ်တို့ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ပေးသည်..။ ထိုအခါ အပြင်သို့ထွက်ပေါ်နေသော စောက်စေ့ငုတ်ကလေးကို ဆွဲဆွဲပွတ်သလို ဖြစ်၍ နေသည်..။ မကြာလိုက်…. “အင်း…ဟင့်……“ နှင်းအိနှုတ်ဖျားမှ အသံလေးထွက်သွားပြီး နှင်းအိပေါင်နှစ်ဖက်မှာ ဟတယ်ဆိုရုံလေး ဟသွားသည်..။ လှဦး၏ လက်ဖဝါးတစ်ခုလုံး ပေါင်ကြားသို့ ရောက်သွားသည်..။ စောက်ဖုတ်မျက်နှာစာကို လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကာ အကိုင်လိုက် ရွှဲ၍နေသော အရည်တွေကို စမ်းမိလိုက်သည်..။ လှဦးလက်ညှိုး စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဖြေးဖြေး တိုးဝင်သွားသည်..။ ပြီးတော့ နို့သီးလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိကြိတ်ရင်း လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက် ပြန်နှုတ်လိုက် လုပ်ပေးသည်..။
နှင်းအိ မခံနိုင်….။ “အ..အ…အင်း…..ကျမပြန်ပါရစေတော့…အဟင်း…..မဟုတ်ရင်လဲ အသေသာ…သတ်လိုက်ပါတော့….ရှင်…ဟင့်…ဟင့်…..“ နှင်းအိ၏ အသံက စောစောကလို ဒေါသသံ မဟုတ်.၊ မောသံဖြင့် စကားကို မနဲ အားယူ ပြောနေရပြီး တောင်းပန်ခယသံ ဖြစ်သည်..။ လှဦး ပြုံးလိုက်ပြီး နှင်းအိရဲ့ ကိုယ်ပေါ်လှိမ့်တက်လိုက်ရာမှ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲဖြဲလိုက်သည်..။ နှင်းအိ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တင်းနေအောင် စေ့ထားသည်..။ လှဦးက သူ့လီးကို လက်တစ်ဖက်မှ ကိုင်၍ စောက်ပတ်ဝကို တေ့ပြီး ဆတ်ခနဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။
အမေ့…..အင့်……“ နှင်းအိမျက်နှာလေး မော့ပြီး သွေးကြောလေးတွေ ထောင်သွားသည်..။ လီးထိပ်ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဝင်သွားပြီ..။ ခေါင်းဝင်မှတော့ ကိုယ်ဆန့်ပြီပေါ့…။ လီးကို ထပ်၍ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖိဖိသွင်းသည်..။ “ဗြစ်…အိုး….ပြွတ်…ဖွတ်……အား…အီး…..ဗြစ် ဗြစ်…အား..အား…“ လှဦး အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်သည်..။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုက သူ့လီးကြီးကို မဆန့်မပြဲ ငုံကာ လက်ခံနေသည်..။ လီးက တစ်ဝက်သာသာတော့ ဝင်သွားပြီ..။ လှဦး နှင်းအိရဲ့ မျက်နှာလေးကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သည်..။ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ ခံနိုင်အောင် ခံမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ပုံပေါက်နေပါသည်..။ လှဦး တဖန် ဆောင့်၍ လီးကို ဆတ်ခနဲ သွင်းလိုက်ပြန်သည်.။
“ဗြစ်….ဗြစ်…..ဘွတ်……အီး…..အင့်…….အင်း………………“ နှင်းအိ သံရှည်လေးဖြင့် ငြီးလိုက်ရင်း ပေါင်နှစ်ဖက်က အစွမ်းကုန်ကား၍ ထွက်သွားသည်..။ အထဲမှာ အရည်တွေက အတော်ကြီး ရွှဲ၍ ထွက်နေသည်..။ လှဦး သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ကုန်း၍ စို့လိုက်ပြီး ကျန်နေသော လီးကို ဖိဖိပြီး သွင်းလိုက်သည်..။ “ပြွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်….ဒုတ်…..အင့်……အီး……“ နှင်းအိ ခါးလေး ကော့တက်သွားသည်..။ သူ့လီးကြီးက စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ မဆန့်မပြဲကြီး ပြည့်သိပ်၍ နေသည်..။ နှင်းအိ ခါးနာသော ဝေဒနာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်တော့..။ အထဲတွင် ပြည့်သိပ်ကြပ်ညှပ်စွာ ရောက်နေသော သူ့လီးကြီးကို အားမလိုအားမရဖြင့် ဆွဲဆွဲပြီး ညှစ်နေမိသည်..။
သူမကို သူမတော့ ဘာတွေ လုပ်မိနေမှန်း မသိ….။ “ကောင်းလိုက်တာ….နှင်းအိ…ရယ်….“ တစ်ကိုယ်လုံး ဆိမ့်တက်သွားသော လှဦးက တိုးတိုးလေး ငြီးလိုက်ရင်း နှင်းအိ ၏ စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ မချိမဆန့် တဆုံးတိုင် ဝင်နေသော သူ့လီးကြီးကို ထပ်၍ ဖိသွင်းသည်..။ “အို့……အစ်ကိုကလဲ…ဟင်း……အ….အို…….“ တဆုံးဝင်၍နေသော လီးကို ထပ်၍ဖိသွင်းလိုက်တော့ လီးက ထပ်၍ မဝင်တော့ပဲ လီးအရင်းနှင့် စောက်ပတ်ဝ ဖိလိုက်မိသည့် ဒဏ်က ယောက်ျားအားနှင့်ဆိုတော့ နှင်းအိ အတော်လေး ခံစားသွားရသည်..။ “ချစ်လွန်းလို့ပါကွယ်……အားမရဘူး….တွေးအိရယ်….“ “ဟွန်း…..ဘာမှန်းလဲ ..မသိဘူး…….“ တွေးအိက နှုတ်ခမ်းလေး စူ၍ အမူပိုပိုလေးပြောလိုက်သည်..။
လှဦးက သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်၍ ဖင်ကြီးကို ကြွကာ ကြွကာနဲ့ လိုးသည်..။ “ဗြစ်…အား….အင်း….ဟင်း…ဟင်း…………..“ နှင်းအိ မျက်လုံးလေးတွေ မဖွင့်တော့ပဲ ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ သူမ၏ ဦးခေါင်းလေးက ဘယ်ညာ ခါယမ်းနေတော့သည်..။ ဒါတင်မက နှင်းအိ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးတွေက လည်း လုံးခနဲ လုံးခနဲ ဖြစ်လို့လာသည်..။ “ဗြစ်….ဗြစ်….ပလွတ်…..ပြစ်….“ “အင်း…အစ်ကိုရယ် ခုမှ နှင်းအိတို့ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ….အင်း….ဟင်း…..“ နှင်းအိ အလူးအလဲ ခံစားနေရသည့်ကြားက သူမသိချင်သော အရာကို အားယူ၍ မေးသည်.. ။
အင်း…အီး…..အား……အစ်ကို အေးမိနဲ့ မရခင်ကတည်းက နှင်းအိကို သဘောကျနေတာ…တစ်နေ့တော့ မဖြစ် ဖြစ်အောင် ချစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ…. “အစ်ကိုရယ်…..“ “ဒါပေမယ့် အစ်ကို နှင်းအိရဲ့ စိတ်ကို နားလည်တယ်…. ဒီတစ်ခါ ပဲ ချစ် လိုက်ရရင် တော်ပါပြီ……..“ “ဟင်……….“ နှင်းအိက ဟင်ခနဲ ဖြစ်ကာ သူ့ကို အလန့်တကြား မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်..။ ပြီးတော့ သူမ၏ ခေါင်းကို ရမ်းကာ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ပြန်၍ ပိတ်ထားလိုက်သည်..။ ခဏအတွင်း မျက်လုံးဒေါင့်စွန်းမှ မျက်ရည်စလေးများ စို့၍ ထွက်လာသည်..။ လှဦးက ဒူးထောင်၍ လိုးနေရာမှ သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့မှောက်ချကာ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ရင်း ဖင်ကို ကြွကြွပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်..။ နှင်းအိမှာ ဆောင့်လိုးသည့်ဒဏ်ရော လှဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီး ဖိထားသည့်ဒဏ်ကိုပါ နှစ်ခုစလုံး ခံစားနေရသည်..။ ဒါပေမယ့် နှင်းအိ ကျေနပ်နေသည်..။
သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချထားသော လှဦးကိုယ်လုံးကြီးကို လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် မိမိရရ ပြန်ဖက်ထားသည်..။ “ဗြစ် ….အိုး… အစ်ကို့…….အီး..အား……“ နှင်းအိ သူမကိုယ် သူမ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိ…၊ လှဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းကြုံးဖက်ပြီး အပေါ်မှ ဖိထားသည့်ကြားက သူမ၏ ခါးလေး အတင်းကော့တက်လာကာ တစ်ကိုယ်လုံး ခါဆင်းသွားသည်..။ နှင်းအိ ပြီးသွားပြီဆိုသည်ကို သိလိုက်သော လှဦးကလည်း ခပ်သွက်သွက် အချက် ၂၀ ခန့် ဆောင့်ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်ပြီး သုတ်ရေတွေကို ပန်းထည့်လိုက်လေသည်..။
အတန်ကြာအောင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်၍ ငြိမ်နေကြပြီးတော့မှ လှဦးက ဘေးသို့ ပက်လက်လှန်၍ ချလိုက်သည်..။ နှင်းအိ သူမဘေးတွင် ပက်လက်ဖြစ်သွားသော လှဦးကို တစ်ချက်ငဲ့စောင်း၍ ကြည့်လိုက်ပြီးမှ ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် လှဦးကို ကျောပေး၍ အဝတ်အစားများကို ပြန်၍ ဝတ်သည်..။ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ကြချေ…။ လှဦးက သူ့ကို ကျောပေး၍ အဝတ်အစားများ ဝတ်နေသော နှင်းအိကို မျက်တောင်မခတ် နောက်မှ ကြည့်နေမိသည်..။ အင်္ကျီတွေ ဝတ်ပြီးသွားတော့ နှင်းအိက နောက်ဆုံး ထဘီကို ခြေထောက်မှ စွတ်လိုက်ပြီး မတ်တတ်ထ၍ ရပ်ကာ ဝတ်လိုက်သည်..။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ အခန်းဝဖက်သို့ လှည့်၍ အပြင်သို့ ထွက်သွားသည်..။
နှင်းအိ လှဦးကို တစ်ချက်လေးမှ လှည့်မကြည့်ပေ…။ အခန်းဝဖက်သို့ လှမ်း၍ထွက်သွားသော နှင်းအိ၏ မျက်ဝန်းတို့တွင်တော့ မျက်ရည်များ ဝိုင်းလျက် ရှိသည်ကို လှဦး အထင်းသား မြင်တွေ့လိုက်ရသည်..။ နှင်းအိ အိမ်ရှေ့ကို ရောက်တော့ သူမဖိနပ်ကို စီးပြီး အိမ်အောက်သို့ ဆင်းလိုက်သည်..။ အပြင်တွင် မိုးက မသည်းတော့ပေမယ့် စဲတော့ မစဲသေးချေ…။ နှင်းအိ ဟိုဟိုသည်သည် ရှာကြည့်လိုက်တော့ ခမောက်တစ်ခုကို တွေ့သဖြင့် ဆွဲ၍ ဆောင်းကာ မိုးဖွဲဖွဲကြားသို့ ထွက်လာခဲ့သည်..။
နှင်းအိ ခြေလှမ်း၍ လျှောက်လိုက်တိုင်း အထဲမှ အရည်တွေက ပြန်၍ ထွက်ကျလာနေသည်..။ လျှောက်ရင်းနဲ့ ပေါင်ကြားတစ်ခုလုံး စေးထန်းထန်း ဖြစ်လာကာ လျှောက်ရတာ ခက်ခဲလာသည်..။ လမ်းလျှောက်ရင်း နှင်းအိ ဘေးဘီကြည့်၍ လူလစ်တာနှင့် ပေါင်ကြားထဲ လက်နှိုက်ကာ ဝတ်ထားသော ထဘီနှင့်သုတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ထဘီတွင် အကွက်လိုက် စွန်းထင်း၍ သွားသည်..။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိ..။ ခေါင်းပေါ်တွင် ဆောင်းထားသော ခမောက်က ခန္ဓကိုယ်အပေါ်ပိုင်း လောက်သာ မိုးရေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး မကြာမီမှာပင် သူမ၏ ထဘီလေးတစ်ခုလုံး မိုးရေတို့ဖြင့် စိုစိုရွှဲသွားမှာ သေချာလေသည်.။
လှဦးနှင့် နှင်းအိ တို့ ကိစ္စကို အစ်မဖြစ်သူ မအေးမိ ပင် မသိလိုက် ။ သူတို့နှစ်ယောက်တည်းသာ သိထားကြသည်..။ နောက်ပိုင်းတွင် လှဦးနှင့် နှင်းအိတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်နေကြသည်.. ။ မလွှဲသာလို့ နှစ်ယောက်သား ဆုံမိကြလျင် လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းကာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံ ကြသည်..။ နောက်ပိုင်းတွင် နှင်းအိက လှဦးကို အကဲခတ် ဆန်းစစ်ကြည့်သည်..။ လှဦးက သူမအပေါ် မရိုးသားသော အရိပ်အယောင်များ ဘာကိုမှ မတွေ့ရသဖြင့် နှင်းအိ တစ်မျိုး စိတ်အေးရသည်..။ ဒါပေမယ့်လည်း ခက်သည်က နှင်းအိဖြစ်သည်..။ သူမလိပ်ပြာ သူမ မလုံ ။ ပတ်ဝန်းကျင်က မသိ၍ ရိုက်ခတ်မှု မရှိသော်လည်း သူမကိုယ် သူမတော့ သိနေတာက ခက်လှသည်..။
ဒီအရိပ်မည်းကြီးကို သူမစိတ်ထဲက ဘယ်လိုများ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရပါ့မလဲ ဆိုသော မေးခွန်းက နှင်းအိ သူမကိုယ်ကို ပြန်မေးမိနေသည်မှာ အကြိမ်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်တော့ပေ…။ သူမ၏ ခန္ဓကိုယ်က ညစ်နွမ်းနေပြီလားဆိုသည့် အတွေးက နှင်းအိရင်ထဲတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ကိန်းအောင်း၍ နေသည်..။ ယခုလည်း ချောင်းစပ်ရှိ တရုတ်စကားပင် သစ်မြစ်ဆုံကြီးပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း သူမ၏ အရိပ်မည်းကြီးကို ပြန်ပြောင်း စဉ်းစားမိနေကာ သက်ပြင်းတွေ အခါခါ ချနေမိသည်..။ စဉ်းစားပြီးသွားပြန်တော့ ပေါင်လေးတစ်ဖက်ကို ဟ၍ လက်လေးတစ်ဖက်ကို ပေါင်ကြားထဲ သွင်းပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို ထဘီပေါ်မှ စမ်းလိုက်မိသည်..။
ဒီအရာက ဘာနှင့်မှ ထိ၍ ရသော အရာ မဟုတ်ပါ..။ လက်ဖြင့် ထိကိုင်ပြီ ဆိုကတည်းက ထိုလက်ကင်းကွာသွားမှာကို စောက်ဖုတ်လေးက မလိုလားသည့်အပြင် ထိထားသော ခုအနေအထားထက် ပိုပြီး ဖိကပ်ပွတ်သပ်လာမှာကို လိုလား၍ နေသည်..။ နှင်းအိ သူမလက်ဖြင့် စောက်ဖုတ်လေးကို အသာလေး ဖိ၍ ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်..။ ပွတ်ရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်းက ပို၍ ကားသွားရသည်..။ နှင်းအိထိုင်နေသော နေရာက ရေကန်ကြီး သုံးကန်၏ ရှေ့ဖက် ချောင်းကမ်းစပ်တွင် ဖြစ်သည်..။ သူတို့ရွာက ဒီချောင်းလေး ကမ်းပါးတစ်လျှောက် တည်ထားသော ရွာကလေး ဖြစ်သည်..။
ကမ်းစပ်တွင် လူသူကင်းရှင်းမှန်း သိတော့ နှင်းအိ ပို၍ ကဲလာသည်..။ ထဘီအောက်နားစလေးကို အသာလေး ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ထဘီကြားထဲ လက်ကို သွင်းကာ စောက်ဖုတ်လေးကို စမ်းလိုက်ပြန်သည်..။ သူမ၏ ခဲအို လှဦးလုပ်တာ ခံလိုက်ရပြီးကထဲက ရိပ်ထားသော စောက်မွှေးလေးတွေက လက်တစ်ဆစ်ခန့်ပင် ပြန်၍ ထွက်နေကြပြီ ဖြစ်သည်..။ ပထမဆုံး လက်ဖျားလေးဖြင့် စောက်မွှေးလေးတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်ပြီးမှ အကွဲကြောင်းမှ ငေါက်တောက်လေးထွက်နေသော စောက်စေ့လေးကို လက်မထိပ်ဖြင့် တို့ထိ ကာ ပွတ်ပေးရင်း နှင်းအိ မျက်လုံးလေးများ စင်း၍ ကျလာရသည်..။ ရွာလမ်းမကြီးပေါ်မှ ချောင်းဖက်သို့ ဆင်းလာပြီး လူတစ်ရပ်လောက် ပေါက်နေသော ဗျိုက်တောပင် များကို ကျော်ဖြတ်လိုက်မည် ဆိုပါက နှင်းအိကိ အတိုင်းသား မြင်ရမည် ဖြစ်သည်..။
စောက်ပတ်ဝတွင် စိုစိစိလေး ဖြစ်နေသော အရည်လေးတွေက စောက်စေ့ကလေးကိုလည်း ထိလိုက်ရော အပြင်သို့ စို့၍ ထွက်လာသည်..။ နှင်းအိ စင်းကျနေသော မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မဖွင့်တော့ပေ..။ လက်ညှိုးလေးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ အသာလေး ထိုးထည့်လိုက်သည်..။ ထွက်နေသော အရည်လေးတွေကြောင့် ချောချောချူချူ တစ်ချောင်းလုံး ဝင်သွားသည်..။ ဒီတော့ နှင်းအိက သူမ၏ လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးသည်..။ လက်ကလှုပ်နေတော့ နှင်းအိရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တသိမ့်သိမ့် လှုပ်၍ နေသည်.. ။
ခဏအတွင်းမှာပင် ဖြေးဖြေးလေး လှုပ်ရှားနေသော သူမ၏ လက်က သွက်သွက်လက်လက် ကြီး လှုပ်ရှား၍ လာသည်..။ နှင်းအိ မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်ထားရင်း နှုတ်ခမ်းလေးက ဟ၍လာသည်..။ “နှင်းအိ…“ “အမလေး…………..“ ခေါ်လိုက်သော အသံက တိုးတိုးလေး ဖြစ်ပေမယ့် နှင်းအိ နားထဲတွင် မိုးကြိုးပစ်လိုက် သည်ဟုပင် ထင်လိုက်ရသည်..။ ထဘီးကြားထဲ ထိုးသွင်းထားသော လက် ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် နှင်းအိ မျက်လုံး ဖွင့်၍ ကြည့်လိုက်သည်..။ “ဟင်……ဆရာလေး……“ ရွာမူလတန်းကျောင်းမှ ဆရာလေး ဝင်းကိုအား တွေ့လိုက်ရသည်..။
နှင်းအိ မျက်လွှာလေး ချကာ ခေါင်းလေး ငုံ့သွားသည်..။ သူနဲ့မှ ပက်ပင်းတိုးရသတဲ့လား….။ နှင်းအိ ရှက်လိုက်တာ…မပြောပါနဲ့…။ ဖြစ်နိုင်လျင် ဒီနေရာမှ ချက်ချင်းထ၍ ပြေးသွားလိုက်ချင်သည်..။ အမှန်တော့ နှင်းအိနှင့် ဆရာလေး ဝင်းကိုတို့က ရှေ့လထဲတွင် လက်ထပ်ကြရန် လူကြီးတွေက သဘောတူပြီးကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်သည်..။ ဆရာလေး ဝင်းကို နှင့် နှင်းအိတို့ ကြိုက်နေကြတာလည်း တစ်နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။ ဒီနေရာက သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့နေကျ နေရာလေး ဖြစ်သည်..။
ဝင်းကို နှင်းအိ အဖြစ်အား တွေ့လိုက်ရတော့ သူ့ကိုသတိရပြီး နှင်းအိ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေသည်ဟု တွေးမိပြီး သနားသွားသည်..။ ဝင်းကို နှင်းအိရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ညင်သာစွာ ကိုင်၍ သူမကို ဆွဲထူလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်း ၍ ဖွဖွလေး နမ်းသည်..။ မြတ်နိုးယုယစွာ ညင်ညင်သာသာနမ်းလိုက်တာဖြစ်ပေမယ့် နှင်းအိက ဒီလို နမ်းတာကို အားမရနိုင်..။ သူမ ပါးကို ထိုး၍ တိုးကပ်ပေးသည်..။
“နှင်းအိ …အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့နော်..အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူး… “ဟင့်အင်း…မလိုက်ချင်ဘူး..“နှင်းအိ သူ့ခါးကို ဖက်ထားလျက်က သူ့ရင်ခွင်ထဲမှ ခေါင်းလေး ခါရမ်း၍ ပြောသည်..။“လိုက်ခဲ့ပါလား နှင်းအိရာ… လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ရတာပေါ့…“ဟင့်အင်း…ရှေ့လထဲဘဲ….လက်ထပ်တော့မယ့်ဟာ……“ဒါတော့..ဒါပေါ့…..ဒါပေမဲ့….“ဘာလဲ..နှင်းအိကို အထင်သေးသွားပြီလား..။ အဲဒါ နှင်းအိ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး..ရှင့်…မှတ်ထား….“ပြီးတော့မှ နှင်းအိက တိုးတိုးလေး…“မိန်းမတွေက ဒီလိုပဲ….“ ဟု ပြောလိုက်သည်..။“အော်….နှင်းအိရယ်……….ဝင်းကို နှင်းအိရဲ့ နဖူးလေးအား တစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီး ခါးကိုဖက်ကာ ရွာလမ်းမကြီးပေါ်သို့ အတ လျှောက်သွားလေတော့သည်.……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged တဈခါပဲတျောပါပွီ